admin | Ukubheja Ibhokisi
Ikhaya / Author: admin
Ngu admin Februwari 5, 2020
I-Dunder Casino ingenye yobunye obuningi obusha embonini yokudlala online, ujoyine izikhala zabafana abakhulu asebekulo 2016, kungekudala emva kokuqalwa kwaso ngoMashi wonyaka ofanayo. Elula, phambi kwehholo lokugembula eliku-inthanethi vele kungasebenza njengokuqina kwalokho okuphakathi kwenkomba: Ukukhetha okucebile kwemidlalo, umnikelo owamukelekile nenqwaba yabathengisi be-software ongazama . Thola isaga okwesikhashana akukaze kube lula ngaleli sayithi futhi lokhu kubuyekezwa i-Dunder Casino kuzokhipha ngqo ukuthi kungani le sayithi ingeyokuthandwa kwabadlali abaningi kangaka. Namathela ngokuzungeza i-wholesale yami ye-Blueprint, kufaka phakathi imidlalo, izinkokhelo, isoftware Dunder Amakhasino kanye nesizinda senkampani.
Izipesheli ezivela ku-Dunder
I-Dunder yisiza esinikeza amakhulukhulu wemidlalo yabahlinzeki abaphezulu, phezulu ngokuningi 800 imidlalo ukukhetha hhayi enkulu kuphela, abathengisi abaziwa kakhulu kodwa nezinkampani ezincane ezifana neThunderkick neRed Tiger Gaming. Kunenqwaba yemishini yokulayishwa, imidlalo ye-jackpot, imidlalo yetafula kanye nesiphamakethe sekhasino bukhoma esinikeza imikhiqizo engcono kakhulu ye-Evolution Gaming. Yini amakhasino amasha aku-inthanethi anakho konke.
Uyemukelwa kwikhasino e-inthanethi esedlule 800 imidlalo ongakhetha kuzo. Le yekhasino eku-inthanethi inikeza imikhiqizo yeNetEnt, I-Microgaming, I-BetSoft, Dlala i-'n Go, Push game NextGen Side City Studios, Thunderkick, I-Yggdrasil Red Tiger Gaming, Isikhathi Esikhulu Sokudlala, Blue Phrinta Gaming, Ukuziphendukela kwemvelo nokuningi.
Ungakhetha emidlalweni yendabuko efana 3 reel Fiesta Jurassic Jackpot nezithelo, noma iya kwesimanjemanje eqhubekayo 5 Reel futhi video slot imishini njengoba 3D Dragon umkhumbi, kanye ne-eccentric futhi epholile, izinyoni ocingweni. Kunemidlalo eminingi ebekiwe ongayikhetha nayo, njengeJurassic Park, Umdlalo wema-Throne, Isihogo Somfana, Isikimu nokuningi. Futhi, uma ufuna ukukuphathela isigidi semililiyoni ngenxa yezitebhisi eziqhubekayo ze-jackpot ungadlala iMega Moolah, Mega Fortune kanye Ukuhaha Goblins. Ngokuya kwemidlalo yomshini wokulungiselela, ngeke udumazeke.
Noma kunjalo, lokhu akuyona imidlalo yomshini we-slot omelelwe kahle eDunder ngoba ibuye ibe neqoqo elinabile lemidlalo yetafula enikezwayo, kusuka kubahlinzeki abahlukahlukene. Ungakhetha imidlalo efana ne-Wheel Wheel, amakhaza, baccarat, USic Bo, Poker, Inja ebomvu nePai Gow.
Kukhona nama-roulette amaningi ngokunikela ngemidlalo efana neRoulette, I-European Roulette, I-French Roulette ne-American Roulette. Ngaphezu kwalokhu, kukhona amatafula amaningi ama-blackjack. Uma uthanda i-poker yevidiyo, kanye ne-assortment yemidlalo enikeziwe ungayikhetha ezinhlotsheni ezinjenge-Aces and Eights, Ama-Jacks noma angcono, I-Joker Poker, wonke ama-Aces, UDeuces Wanyama nabanye abaningi.
Amakhasino abukhoma ahlala enikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile. A Dunder ngenhla amatafula imidlalo ejwayelekile, kukhona nekhasino enkulu ebukhoma enikwa amandla yi-Evolution Gaming. Le teknoloji inikezela ngamakhamera wewebhu aphezulu kakhulu anikezela ngamazinga aphezulu kakhulu. Ungathola injabulo yemidlalo engcono kakhulu ebukhoma efana ne-roulette ebukhoma, umnyama, baccarat, I-Casino Hold'em, Amakhadi amathathu e-Poker nokuningi.
Amakhasino nemishini yokudlala
Imidlalo iyindawo okugxilwe kuyo kunoma iyiphi ikhasino futhi iDunder ayidumazi kulokhu. Ngiyabonga kokudlula 17 abathengisi be-software, kuphelile 100 imidlalo yekhasino enikezwa ekhasino. Thola ithuba lokudlala amanye ama-slots athandwa kakhulu njengoMega Moolah Microgaming afike kumarekhodi ebhendi enkulu ebiza 13 izigidi zama-euro. Amanye ama-jackpots ayimpilo eshintsha impilo yokuthi uNkulunkulu uyi-jackpot ethuthukayo noma i-The Bad Knight slot eyaziwayo, konke lokhu phakathi kweminye imidlalo eminingi enemiklomelo emincane efanelekile ukuvakasha. Izinhlobonhlobo zamakhasino ziphela lapha. Abadlali bangajabulela isipiliyoni sekhasino ngokomzimba ngesigaba somthengisi bukhoma. Lapha, Abadlali bangajabulela umkhathi wekhasino nabathengisi ababukhoma, imali yangempela paris futhi abadlali baphila ngokusakaza amakhasino asheshayo.
• Imishini yeSlot
• Imidlalo yabathengi ebukhoma
• I-Video Poker
Ukwehlukahluka kule khasino kuyaqhubeka ngokudlula 500 Balahla imidlalo yeselula etholakalayo. Kunezinhlu zemidlalo yetafula abalandeli abazoyikhetha kusuka kufaka phakathi izinhlobo zakudala nezanamuhla zale midlalo efana ne-roulette ne-blackjack. Abathandi be-poker abashiywanga emuva kule mikhakha yemidlalo. Thola Zonke I-American Poker, Joker kabili, Amashumi noma Ngcono, IJoker Wild neBon Bon Poker emidlalweni yamavidiyo poker. Eminye imidlalo ye-poker ifaka ukukhetha kwe-poker yetafula njenge-Casino Hold'em, Kuhle Gow Poker, ICyberstud Poker neBaccarat phakathi kwabanye abaningi. Uzomangala ukuthi lesi akusona ukuphela kokuphindaphindwa kwemidlalo ongayidlala ekhasino. Imidlalo ekhethekile yesigatshana ungadlala imidlalo efana namakhadi e-ekuqaleni. Yebo, ungadlala amakhadi we-scratch online ngokuthenga imephu bese uqhafaza iScratch ukuze uveze izinombolo.
Amabhonasi e-Casino kanye ne-Promotions Dunder
Ukunikezwa kwe-Dunder kuyinto okunikezwayo okuphana kakhulu okutholakalayo kumakhasino aku-inthanethi. Abadlali lapha badlula ekwamukeleni ibhonasi Dunder 4 level nje ngemuva kokusayina. Lapho inqubo yokubhalisa isiqediwe, uthola 20 i-spins yamahhala ku-slot NetEnt Starburst, ayikho idiphozi edingekayo. Isidingo kuphela sokukwazi ukhesha lokhu kunqoba ukudlala kulo lonke u-25x. Kwidiphozi yakho yokuqala, wawo wonke amanani afinyelela ku 50 ama-euro, uthola 100 Ama-Euro mahhala. Idiphozithi yakho yesithathu thola a 50% Qondanisa nganoma yisiphi isamba esifinyelela 100 ama-euro. Akupheli okwamanje. Idiphozithi yakho yesithathu nayo iyahlonishwa nge 25% ibhonasi kuwo wonke amanani ngaphakathi 150 Ama-Euro. Ekugcineni, lapho wenza ibhonasi yakho yesine, lindela mahhala 300 ama-euro ngaphezulu kwe 25% ibhonasi.
Ngenhlanhla yakho, ayikho ibhonasi Dunder code edingekayo ukufinyelela iphakethe lokwamukela ngemuva nje kokubhaliswa kwakho, ungagxumela esenzweni nge-Dunder akukho ibhonasi yediphozithi. Kukhona nokubheja okuphezulu kakhulu ngokuchazwa ngakunye usebenzisa ibhonasi yi- / £ / $ 5. Lokhu kusebenza kuwo wonke amazinga amabhonasi. Esimweni esivelakancane ukuthi inani lebhonasi alinikwa ibhalansi yakho yokuxhumana ixazululwe kungasaphathwa isikhathi sekhasimende. Ngokuphathelene ne-Dunder Free Spins, kufanele usebenzise ngaphakathi 24 amahora wokubamukela. Ukwehluleka kuzoholela ekuphelelwe yisikhathi. Ekugcineni, ukwenza izinzuzo zama-spinins akhishwe mahhala udinga ukufeza ukudlala kwe-25x. Ngemuva kokuzijabulisa lezi futhi ube yilungu, usathola ukujabulela ibhonasi ehlukahlukene yediphozi enikeza ikhodi yekhuphoni Dunder.
Ukuphamba Amakhasino Welcome Bonus
Abanini bamakhasino wesifundazwe i-Dunder Casino esizeni abasungule iphakheji eyamukelekile yebhonasi “njengoba sasifuna,” futhi empeleni kubukeka njengokunikezwayo okukhangayo. Idiphozithi yakho yokuqala izomvuzwa ngebhonasi “kathathu imali yakho” kuya ku 50 izinongo zamahhala ezinokuphana ngokweqile 180 ku-Starburst slot eyake yaziwa kakhulu nge-NetEnt. Idiphozithi yakho yesibili ingathola ibhonasi efinyelela kuyo 150 kususelwa ku 50% ibhonasi, ngenkathi idiphozi yakho yesine ihambisana 25% ukuze 400 ngokulandelana. Impela, kuyindlela enhle yokukhuthaza abadlali ukuthi baphonse ezinye izikhathi ezimbalwa ukuze bajabulele ibhonasi yomvuzo ephelele futhi 180 ama-spins amahhala akhishwa ngamaqembu 20 okokuqala 9 izinsuku. Ibhonasi eyamukelekile (futhi uzuze i-spins yamahhala) ube nesidingo sokumangala 25 izikhathi isamba sediphozithi kanye nebhonasi ngaphambi kokukhipha.
Ngenkathi iDover Casino ayisebenzi uhlelo olujwayelekile lokuthembeka, kusenezizathu eziningi zokuthi abadlali bahlale bethembekile kweyiphi amakhasino anamuhla. Okuphilayo iqiniso lokuthi uhla lwayo oluhle kakhulu lwezihloko zomdlalo wekhwalithi kuzogcina ama-gamers ebuya ukuthola okuningi, futhi abakamukeli uhlelo oluhle lokuvuza lokukhuthaza ukuphinda ibhizinisi. Amakhasimende inzuzo ephezulu angalindela ukuthintwa yiDunder Casino, ngakho-ke awukwazi ukucela ukungena kule kilabhu ekhethekile amakhasimende we-VIP angalindela ukuthola okuningi okuzobuyiselwa emuva kanye namabhonasi awengeziwe nemivuzo.
Ungafaka idiphozi nge-Visa nge-Visa / I-MasterCard, Abasebenza Imali, I-Neteller, I-Paysafecard, ne-Fintech ekhethwayo oyithandayo uma use-UK. Ezinye izifunda zingafaka futhi izinketho eziningi zasendaweni.
Wonke amadiphozithi acutshungulwa ngaso leso sikhathi ngaphandle kwezindleko, ubuncane be- € / £ 20.
Izikhathi zokulinda ekhasino eku-inthanethi i-Dunder ziyahlukahluka ngokuya ngendlela yokukhokha oyikhethayo. Kungathatha kusuka 24 amahora ukuze 4 izinsuku zebhizinisi ukuthola inkokhelo, ngokwesilinganiso.
Impela, zonke izicelo zokuhoxisa kumele zivunyelwe. Lokhu kuvame ukwenziwa ngaphakathi 24 amahora futhi uzothola i-imeyili yokuqinisekisa. Ngemuva kwalokho izikhathi zokulungiswa kwenkokhelo ziyehluka ngokuya ngendlela oyikhethile:
• Ngabe nonke / I-Neteller: Masinyane
• Ngethembekile: izinsuku zokubhanga eziseduze / 1-3 (kuya ngesidingo)
• IVisa: 1-3 izinsuku zokusebenza
Akunamali yokuhoxiswa ekhokhiselwe lezi, nge € / £ 20 futhi ngokuba ubuncane.
Qhathaniswa nezinye izingosi zemidlalo, Izinkokhelo ezilahliwe zisebenza kakhulu futhi ziyashesha.
Isayithi le-Dunder le-mobile liyatholakala ngesiNgisi, IsiFinnish, IsiNorway nesiSweden futhi sinikeza abadlali inani lezezimali abazokhetha kuzo, okuwukuthinta okuhle. I-Dunder inikeza abadlali iphalethi elicebe ngaphezulu 100 imidlalo yeselula, dlala izikhala zakudala, Slots ngama-jackpots athuthukayo kuzinkokhelo ezintsha ze-NetEnt.
Kafushane, benze umsebenzi omuhle kakhulu ekwakheni indawo yabo ephathekayo, njenge sayithi ye-Dunder ephathekayo empeleni inguqulo encane futhi yanciphisa isayithi labo eliyinhloko. Kulula ukuyisebenzisa, elula futhi ephumelelayo futhi yobuhle, ngaphandle kwemininingwane engadingekile eningi. Kulula ukudlula kulo futhi nabadlali ngeke babe nenkinga yokuthola imidlalo yabo abayifunayo njengoba ithuluzi lokucwaninga lihlakaniphile kakhulu futhi likunikeza ithuba lokufuna izihloko ngamagama, Umthuthukisi wesoftware, noma nezimpawu zayo.
Ukuphamba kuyisinqumo esihle kakhulu kubathandi bekhasino, noma ngabe iyiphi insiza.
IDafabet ingelinye lamasayithi amakhulu e-paris e-Asia futhi inikela ngesipiliyoni esihlukile kwezemidlalo naku-paris online casino. Kunemidlalo ehlukile lapha ongayithola kwamanye amasayithi amaningi ase-paris, futhi imidlalo ehlukahlukene iyamangalisa. UDafabet usho ngempela ukuthi singazama ukufaka isikhalazo emakethe enkulu yase-Asia, Imakethe yaseYurophu futhi incane kepha icebile.
IDafabet paris yisayithi elibhalisiwe nelinamalayisense ePhilippines kepha lamukela abadlali abavela kuwo wonke umhlaba.
Kunemikhiqizo eminingi etholakala kuwebhusayithi yeDafabet futhi yamukela ngentokozo zonke izinhlobo zabathengi. Okokuqala, umkhiqizo wabo oyinhloko i-paris yezemidlalo. Kukhona izingxenye ezimbili ezihlukene paris ezemidlalo, I-OW neDafa Sports Sports, lapho ungabheja khona ezinhlobonhlobo zemidlalo, neminye imicimbi esports. Kukhona nekhasino enkulu nekhasino lomthengisi bukhoma, imidlalo ye-arcade, ilotho, i-poker, imidlalo nama-virtuals.
Njengoba kuphawuliwe, bangu 2 isigaba esehlukile paris ezemidlalo, ezemidlalo ne-OW Dafa Sport. Ekuboneni kokuqala, akucaci ukuthi umehluko phakathi kwalezi zingxenye ezimbili, kepha isiza sisho okulandelayo:
• 1. Amathuba amabi i-Dafa Sport isebenza ngendlela ehlukile kweDafa Sports OT Sport. Imidlalo yeDafa, imali oyifakayo Ukubheja ukubheja njalo inani ozibeka engcupheni futhi inani elizodonswa ku-akhawunti yakho.
• 2. Ngaphezu kwalokho, kuwo wonke ama-paris kuzo zonke izimakethe zayo yonke imidlalo, paris bukhoma noma ukugijima kwe-paris, kwenzeka kusuka kufayela le- 0-0 amaphuzu wokugcina. Akunasikhathi, amaphuzu wamanje adonswe kwisikolo sokugcina ukuze asebenze uma uwine noma ulahlekelwe ukubheja kwakho.
Kukonke, womabili amasayithi afakiwe, ungabheja kwezemidlalo ezingamashumi amabili, njengebhola, i-basketball, ikhilikithi, i-hockey yeqhwa nebhola lesandla. Igxila kwezemidlalo emikhulu futhi ayinikeli ngemidlalo eminingi ye-niche. Noma kunjalo, kule midlalo unezinketho zamakhulu ezimakethe. I-Basketball izokunikeza izinketho zazo zonke izingqungquthela, ibhola lizokunikeza ithuba lokubheja kuma-lean emhlabeni jikelele. Isayithi, njengoba bekulindelekile, futhi ihlanganisa eziningi ze-Asian League nazo. Ungabheja nangemicimbi eyahlukahlukene ye-eSports.
Ungenza zonke izinhlobo ezahlukene ze-paris, kufaka phakathi ukukhubazeka kwase-Asia, amaphuzu afanele, msulwa futhi ulula, phezu / ngaphansi nokunye okuningi. Ukuze kube lula kuwe, futhi unenketho yokusebenzisa amafomethi ahlukahlukene wamathuba, kufaka phakathi iMalaysia, idesimali, E-USA, I-Indonesia neHong Kong. Kukhona nethuba lokheshi kwamanye ama-paris.
Ezemidlalo zeDafa kukhona nengxenye ye-paris ebukhoma ehloniphekile ngokwanele, ehlanganisa ezemidlalo eziningi ezifana nebhola phezulu, I-NBA, i-baseball; ngisho ne-eSports. Inketho yokusakaza bukhoma iyatholakala futhi uma une-akhawunti. Noma kunjalo, uma ungakwenzi lokhu, banikeza umdlalo ngomdlalo kanye nezibalo ezinhle kakhulu ezibukhoma. Kukonke, kuba yesikhulumi paris ezemidlalo, ikakhulukazi emakethe yase-Asia.
Enye indawo enhle esizeni iyi-casino online. Ngokungafani nabanye abaningi abaseduze, inikeza imidlalo evela kubahlinzeki abaningi abahlukahlukene kufaka phakathi i-Playtech – ukusho ezimbalwa. Kanjalo, kuphelile 400 imidlalo enokukhetha okuhlukahlukene. Ungakhetha kusuka ezindaweni zokuqala njengeFunky Monkey, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, I-Safari Heat noma i-Geisha Story, noma ungazama umdlalo we-jackpot, kufaka phakathi iminyaka yama-franchise Gods – kufaka phakathi inkosi yase-Olympus ne-Prince of Olympus kanye neGladiator Jackpot neJackpot Wu ende.
Ngaphezu kwalokho, kunamakhulu emidlalo ebukhoma uma uthanda ikhasino ebukhoma. Kunamaqembu ahlukene – njengeDiamond Club, Iqembu leTopaz, IBlack Pearl Club nokuningi – lapho ungadlala khona i-roulette, Ijubane Baccarat, Dragon Tiger nabanye abaningi. Ungakhetha amatafula i-Evolution Gaming, I-Asia Gaming, I-Playtech nokuningi.
Eminye imidlalo ongayidlala emidlalweni yasekhasino itafula elingaphezu kwe-3-Card Brag, Craps, USic Bo; poker imidlalo yevidiyo; imidlalo ye-arcade; imidlalo yelotho; ama-virtual nokuningi kufayela le- “Imidlalo” ingxenye.
Futhi banekamelo elikhulu le-poker – usebenzisa i-software ye-Playtech. Lokhu kusho ukuthi bakunethiwekhi ye-iPoker. Lokhu kuhle ngoba kufanele uhlale ukwazi ukuthola umdlalo ovulekile futhi ugijime ukuzowudlala.
Inethiwekhi igxila emdlalweni omfishane, kanye nemidlalo ye-FastFold Speed ​​Poker – kukuvumela ukuthi udlale okungaphezulu kwe 150 izandla ngehora. Ngaphezu kwalokho, kukhona imiqhudelwano etholakalayo yokudlala ngamanani angakholeki kanye nezinkokhelo zeTwister Poker SNG Jackpot; I-Wild Twister; I-VIP Free Roll Tournaments nokuningi. Kukhona i-poker engeza okuthakazelisa kakhulu kusayithi.
Ngibhalisa kanjani kuDafabet?
Ukuqinisekisa ukuthi uthokozela izimakethe zeparis kanye neDipabet engathandeki, uzodinga ukubhalisa i-akhawunti entsha. Inqubo yokubhaliswa kweDafabet kulula – futhi uyashesha ukuqeda.
Nasi isinyathelo ngesinyathelo ngenqubo ukuze wazi kahle ukuthi yini ongayilindela.
Okokuqala, vakashela iwebhusayithi iDafabet
Uzodinga ukunquma igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti yakho entsha. Lokhu kuzosebenza njengokuvikeleka okuyinhloko futhi uzodinga ukukufaka isikhathi ngasinye lapho ungena esikhathini esizayo
Ngemuva kwalokho faka igama lakho, ikheli, inombolo yocingo ne-imeyili
Uma unesibonakaliso iDafabet ikhodi ungayifaka ebhokisini
Ekugcineni, mane ubheke imigomo nemibandela amabhokisi akhombisa ukuthi uyayiqonda inqubo yokubhaliswa kwe-Dafabet bese uyachofoza “Bhalisa Manje” inkinobho
Yilokho kuphela okukhona ukubhalisa ukunikezwa kwe-Dafabet – manje uphethe i-akhawunti, mahhala ukuhlola konke okutholakala kuwebhusayithi yeDafabet. Khumbula, yize kungekho phawu uDafabet alunikeza ukuwina njengamanje, kuningi okusazonikezwa kusayithi.
Ukunikezwa kwe-Dafabet paris kwenzelwe abathengi abasha futhi kusho ukuthi udinga ukudala i-akhawunti. UDafabet uyicwengekile inqubo, thatha imizuzu embalwa ukubhalisa i-akhawunti. I-Dafabet Ukubheja kwamahhala ibhonasi enkulu eyamukelekile yabahlaseli abasha, ethembisa ukuya kufinyelela ku- £ 30 eParis mahhala uma ukubheja kwakho kokuqala kungafiki. I-Dafabet yamukela ibhonasi elingana nokubheja kokuqala okungenani okungu- £ 10, futhi izofakwa ngaphakathi 24 amahora walokhu kubheja awafiki. Ngeke uthole okungcono kakhulu kunalokhu kwenye indawo.
Okunye ukunikezwa okukhethekile iDafabet
Ngaphezulu kweparis kunikezwa iDafabet, kunabanye abaningi ongabakhetha ama-punter akhona. Ukubheja kwamahhala ku-Dafabet ACCA eqinile kulabo abenza ibhethri lokukhetha okuyisithupha. Uma iqembu elilodwa lihlulwa, uzoba iqhaza lakho kubuyiselwa kuze kube £ 30 ukubheja kwamahhala. Akunamagama amaningi wokucabanga ngalokhu kunikezwa kwe-paris Dafabet, inqobo nje uma i-ACD yakho ibekwa ngokungafani 1.50 noma ngaphezulu. Ngo paris play ngeke kubangele izimali ibhonasi.
Enye inzuzo ithuba labo elihle kakhulu lesithembiso esiqinisekisiwe sikaDafabet, iyatholakala kuwo wonke umhlangano wamahhashi wase-UK nowase-Ireland. Uma ubeka ukubheja kwakho noDafabet bese wenza ukukhetha kwakho ngentengo, kodwa i-SP inkulu kakhulu bazoyikhokha ithuba elihle kakhulu.
Ukunikezwa kukaParis Dafabet ongumshayi magoli wesibili ovelele nakho kumnandi. Uma owashaya amagoli wokuqala ethola igoli lesibili esikhundleni salokho. Futhi, funa iDafabet ayikho ibhonasi yediphozi. Imvamisa ayiboniswa, kodwa kufanele uthathe i-Dafabet ayikho ibhonasi yediphozi ngazo zombili izandla uma unenhlanhla.
Ungasifaka kanjani isicelo sokwamukelwa kwe-Dafabet
Okwalabo abafuna ibhonasi eyamukelekayo iDafabet, ngeke kube yisikhathi eside. Ukubheja kwamahhala kweDafabet kutholakala kuphela kumakhasimende amasha, ngakho-ke uzodinga ukusetha i-akhawunti ngaphambi kokwenza noma yini enye. Ngemva kwalokho, kufanele ubeke okungenani £ 10 ukufanelekela. Isinyathelo esilandelayo ukubeka ithuba lakho lokulinganisa kuko konke ukubheja kwezemidlalo. Uma lokhu kubheja kungafiki, UDafabet umatanisa nokubheja futhi akunikeze imali yebhonasi kuze kufike ku- £ 30.
Akukho phuzu kubhuki elinemakethe engcono kakhulu kanye namathuba uma uthembela ngemali yakho – noma uma benza kube nzima kuwe ukuhambisa imali yakho. IDafabet inebanga elihle kakhulu lezindlela zokukhokha ezikuvumela ukuthi ubeke futhi ukhiphe izimali zakho ngendlela elula kakhulu – nangendlela evumelana nawe kakhulu.
Izinketho zokufaka noma zokukhipha izimali kwi-akhawunti yakho iDafabet:
• amakhadi wesikweletu noma wedebit i-Visa
• amakhadi esikweletu noma i-MasterCard yokudonswa kwemali
Ukufaka imali ku-akhawunti yakho kulula kakhulu – vele ulandele imiyalo esesikrinini esigabeni sebhange – futhi konke kukhombisa ngokushesha, ukuze ukwazi ukukwenza ngokushesha lapho ukhetha khona.
Izicelo zokuhoxa zivame ukuthatha phakathi kwezinsuku ezintathu kuya kwezinhlanu zebhizinisi – yize ukusetshenziswa kwezindlela zesikhwama se-elekthronikhi kushesha kuze kube cishe ihora.
Inani eliphansi ongalifaka ngenye yezindlela zokukhokha ngu- £ 10 – ngenani eliphakeme lokuhoxa elingu- £ 30,000 uma usebenzisa i-Visa, I-MasterCard, Maestro futhi Electron. I-Moneybookers ikuvumela ukuthi ubhalisele i- £ 60,000 ngenkathi umkhawulo iNeteller uyi- £ 31,000.
Uhlelo lokusebenza lweDafabet
Uma ufuna inkululeko ethe xaxa kubhuki yakho eku-inthanethi lapho-ke ufuna ukwazi ukwenza ukukhetha kwakho noma ngabe ukuphi – futhi noma nini lapho uthanda. Asikho isidingo sokulanda uhlelo lokusebenza lweDafabet ungamane usebenzise isiphequluli sedivayisi yakho yeselula ukuthola isiza futhi uhlole izimakethe ezifanayo ngendlela eyenziwe kahle ocingweni noma kuthebhulethi yakho.. I-paris yamaselula idume kakhulu eminyakeni yamuva nje futhi ungabeka yonke i-paris kuselula ye-Dafabet.
Ungabona ukuthi noma ngaphandle kokucaciswa kokunikezwa kwesibonakaliso okunikezwa njengamanje kusenezinto eziningi kulobhuki. Ngokubhalisa i-akhawunti, uzinika ithuba lokuthi ufune amaprimiyamu namaphromoshini wesikhathi esizayo – ngenkathi ngijabulela izimakethe zezemidlalo kanye neparis edlala izici zeDafabet.
Konke ongakwenza kunguqulo yedeskithophu yesayithi iyatholakala ngokusesha i-Dafabet kusiphequluli sakho seselula. Lokhu kusho ukuthi ungenza ukukhetha kwakho emgwaqeni – bese ulandela yonke intuthuko yakamuva kumcimbi owukhethile ngaphambi kokubeka ukubheja kwakho. Lokhu kukunikeza ukuqonda okungcono kakhulu ukuthi izimakethe ziguqukela kanjani ekudlaleni noma kumdlalo oqhubekayo.
I-FAQ Yokubhaliswa KweDafabet
Ukuvula i-akhawunti entsha nge-Dafabet kulula kakhulu, kepha kusenemibuzo okufanele iphendulwe lapho ubhalisa okokuqala. Nayi eminye imibuzo ebuzwa njalo mayelana nalo opharetha.
Ingabe kukhona ukunikezwa kwe-Dafabet?
Ayikho irejista enikezwa iDafabet egijima – kepha qhubeka ubheke emuva ukubona ukuthi yethulwa nini.
Yini engingabheja ngayo kuDafabet?
Kungaba lula ukufaka kuhlu imicimbi ongeke ube nayo ukubheja kwi-Dafabet! Kunokukhethwa okukhulu kwezimakethe ezivulekile kubanikazi bama-akhawunti wamakhasimende – ehlanganisa ezemidlalo emhlabeni jikelele.
Ngingabhalisela iDafabet kuselula?
Yebo. Vele ulandele inqubo efanayo njengoba ichaziwe kulokhu kubukeza – kodwa kudivayisi yakho yeselula – futhi uzokwazi ukufinyelela kuzo zonke izici ezifanayo njenge-desktop eDabetabet site.
Ungubhuki uDafabet engingamethemba?
UDafabet ubengomunye wabantu abadume kakhulu – futhi ezinkulu – ezemidlalo ukubhuka embonini isikhathi esithile manje. The safety and security of the site are second to none – and Dafabet is also the main sponsor of football clubs Celtic and Fulham and the national team of Wales. There is also the Tournament of Masters in Dafabet so it shows that billiards is a great brand name in the world of online sports betting.
Although there is no registration offer available at Dafabet, this situation can change, which is behind a checksum for updates. accounts holders can now receive best odds guaranteed on all horse racing in the UK and Ireland, nokho. If the SP is greater than the price you made your bet, then Dafabet will pay the highest price.
Coral bet one of the most recognizable names in sports betting and has more than 1,800 betting shops across the country. Baye bahlakulele uhlelo lokusebenza lokubheja kwama-Coral kanye neminikelo eku-inthanethi kakhulu eminyakeni, abe omunye the best emhlabeni, ngokusakaza bukhoma, amathuba ayagqamile futhi enye yamasayithi kulula ukuyisebenzisa.
Umkhiqizo uqobo ubelokhu ekhona kusukela lapho 1926 futhi udlule ekuhlanganisweni okuningana, kufaka phakathi 2016 lapho bejoyina khona iLadbrokes neGala Coral Group. Basuke emandleni baya emandleni ukusuka lapho futhi manje basebenza ngaphezulu kuka 130 amazwe.
Ukukhula, Sebeku-inthanethi isikhathi esingaphezulu kwamashumi amabili futhi iyaqhubeka nokuba semgqeni wokuqala uma kukhulunywa ngokubheja kwezemidlalo!
Coral In-play ukubheja
Muva nje, AbakwaCoral bahlele kabusha amabhidi abo ewebhu ekubhejeni komdlalo, kubhejwa bukhoma noma ongakhetha kukho. ingubo yamakhorali imicimbi eminingi ehlukahlukene nsuku zonke impilo. Zonke lezi zingabukwa ekhasini eliyikhaya lasekhaya lesigaba sokudlala. Ukuze uthole okwengeziwe mayelana nokubheja, abagibeli badinga kuphela ukuchofoza komunye wemibukiso futhi bazobheka zonke izibalo namathuba wakamuva.
Uma ukhetha umcimbi, uzothola amathuba anemininingwane. Kukhona ukukhethwa okubanzi kokudlala, noma ingxenye yamathuba ingasebenzisa ezinye izinketho zokuhlunga. Ukuqala ukujabulela ukubheja bukhoma, Amakhorali, vele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho bese ukhetha Ukubheja Ukudlala, ungayithola phezulu ekhasini eliyinhloko.
futhi inikeza ukugeleza okubukhoma kwamakhorali. Lokhu ukwengeza okuhle kusayithi. Lapho, Ukusakaza kwe-coral ngaphezulu 5,000 imicimbi unyaka wonke. Kubandakanya umbhoxo, i-basketball, ibhola likanobhutshuzwayo, ithenisi, nesnooker. Kulabo abasebenzisa ukubheja kohlelo lokusebenza lwefoni ephathekayo, izinsizakalo zokusakaza bukhoma zikhawulelwe futhi uCoral umane anikeze imicimbi yethenisi neyebhola. Konke ukusakazwa bukhoma kumathuba okusinda. Ungabona ukuthi imidlalo inikezwe ukubonga kusithonjana se-TV.
Ama-corals awanikeli ngemidlalo kuphela, futhi kuyikhasino eku-inthanethi. Ngakho-ke, labo abane-akhawunti bangajabulela zonke izinhlobo zezenzo zokubheja lapho bevakashela isiza. Ngenkathi iCoral ingaqalwa njengokubheja, bangeze isigaba sekhasino esihlanganisa yonke imidlalo yakudala, imidlalo yabathengisi bukhoma nezindlela eziningi zokukhiqiza. Ngokufanayo ne-Sportsbook, Coral Casino futhi inikeza ukukhushulwa eziningana. Okwamanje banikeza ibhonasi yokubhalisa kumakhasimende amasha. Uma ufaka i- £ 1o ungathola kufika ku- £ 50 ibhonasi yamahhala (T & Cs ziyasebenza). Bheka amawebhusayithi ngezikhathi ezithile njengokushintshwa komnikelo wokuphromotha njalo.
Ezemidlalo nokubheja imakethe
Njengoba sishilo, Ezemidlalo zamakhorali, okokuqala nje, indawo yokubheja. Kanjalo, inikeza ububanzi bezinto ezingafani zokubheja kuwo wonke amakhasimende. Lapha, ungakhetha ibhola, Ibhola laseMelika, i-baseball, isibhakela, ikhilikithi, hockey, ithenisi, isoka, umbhoxo, igalofu, nezinye izinhlobo eziningi zemidlalo. Obhuki be-Coral banikeza abathengi uhlelo olunothile lokukhetha, futhi. Ungabeka izinhlobo ezahlukene zokubheja, ngokuya ngokuthanda kwakho nokuthi kungenzeka ube nomdlalo okhethiwe. Ngaphezu kwalokho, lapha ungabeka ukubheja kwezepolitiki, Okukhethekile kwe-TV, ama-movie, osaziwayo, kanye neminye imikhakha engeyona eyezemidlalo. Izinketho zokubheja ze-Coral zihlaba umxhwele ngempela, anhlobonhlobo lwamathuba angeziwe, njengebhola lamakhuphoni, imakethe enkulu ngokushesha, amathuba athuthukisiwe, nokunikezwa kwephromoshini. Okubaluleke kakhulu, inkampani ihlinzeka abathengi ngamathuba emakethe aqine kakhulu. Ziphezulu kancane kunalezo ezinikezwa abanye ababhuki abaningi, kodwa abagibeli bajwayele ukuzwa lokhu. Kuyafaneleka futhi ukusho ukuthi ababhuki be-Coral bagxila, okokuqala nje, e-UK nabathengi, ngenkathi labo abavela kwamanye amazwe benganciphisa amathuba kuwebhusayithi. Ngesizathu esifanayo, beka amadili ezemidlalo aseBrithani, ukunganakwa komncintiswano ongahlangene nhlobo ne- “izwe elikhulu”. I-Coral football jackpot – enye into esingakwazi ukuyiziba – yenza isonto ngalinye. Inhloso yakho lapha ukubikezela umphumela we 15 imidlalo, okukuvumela ukuthi uwine okungange- £ 100,000 echibini le-jackpot eliqinisekisiwe. Ungakhetha ukuwina ekhaya, kude ukunqoba noma ukudweba imincintiswano eminingi kwiligi ephezulu yase-UK. Isigxobo esiphansi yi- £ 0.25 umugqa ngamunye. Imigqa eyengeziwe oyikhethayo ukubheja kwe-Coral football jackpot, inhlanganisela eyengeziwe okufanele uwine nayo. Inzuzo yakho incike kwinani eliphelele labangenele elinikezwe iqiniso lokuthi idividendi.
Le nkampani iyaziqhenya ikakhulukazi ngamathuba okubheja adlala ngokugcwele, elibhalwe ekhasini lasekhaya. Umsebenzisi ngamunye unokufinyelela okusheshayo kokubheja kwe-Coral ngemicimbi yezemidlalo yamanje, kusuka ebholeni kuya kugalofu. Ungahlola kalula uhlu lwemincintiswano oluzofika ukhethe oluzofaka ukubheja kwakho. Isigaba sihlungwe ezemidlalo, ngakho-ke akudingeki ulahlekelwe yisikhathi sokufuna umjaho wamahhashi we-Coral noma ezinye izinhlobo ozifunayo. Enye into ethokozisayo yi-Cash Out ekhethiwe. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise ithuba lakhe lokuqala uma ukubheja kufika, kanye nokuthola ukubheja emuva uma ulahlekelwa – inqobo nje uma ezobheja umcimbi usuphothuliwe. Ngesayithi lezemidlalo laseCoral, ungachofoza umqhudelwano okhethiwe, noma ngabe kuyinqolobane noma i-volleyball, futhi uthole ukubonwa okuningiliziwe kokucaciswa kwalokho okunikezwa yimakethe emcimbini othize. Kuyinto elula kakhulu ngokubheja okusheshayo nokunenzuzo kokudlala. Iphindaphindwe ukulayishwa kwejubane nokusebenza okubushelelezi, wonke la mathuba enza ukuthi ama-Coral anikele ngokukhanga ngokwengeziwe kuwo wonke amaqembu wabathengi. Ukusakazwa bukhoma yinto ebalulekile yewebhusayithi. Umsebenzisi ngamunye angabuka abaningi 2,000 imidlalo bukhoma isonto ngalinye, futhi leli thuba likhululekile ngokuphelele. Ukuphela kwento okufanele uyenze ukuze ujabulele ukugijima kweCoral noma ibhola kwimodi eku-inthanethi ukuvula i-akhawunti exhaswe ngemali. Inani lemali esikhwameni sakho semali lingaba lincane njenge- £ 1, okwenza kungabi nankinga nhlobo. Ukusakazwa bukhoma bukhoma nedolobha kuyamangaza: kufaka phakathi i-snooker, umbhoxo, imicibisholo, badminton, ibhola lesandla, ivolibholi, neminye imidlalo ethandwayo. Uhlu lwemidlalo luyehluka kakhulu, kepha ibhola le-Coral belilokhu liyinto ebaluleke kakhulu yokusakazwa bukhoma, Inhlangano, Iligi 1, kanye ne-Eredivise okuxoxwa ngayo kuqala.
Uma ungumuntu othanda ulwazi lwekhasino lomhlaba wangempela, mhlawumbe ngeke udumazeke ngeCoral. Izinketho zabo zamakhasino bukhoma kufaka phakathi:
• Zungezisa u-Win
Kunezinto eziningi ongakhetha kuzo esigabeni ngasinye ongakhetha kuzo, futhi ungabona shazi ukuthi imaphi amatafula avulekile ngoba ithebhu eluhlaza ohlangothini ikutshela ukuthi ungadlala ungaxhunyiwe ku-inthanethi noma lelo tafula futhi likunikeze isikhathi lapho lizobuyela ku-inthanethi ngomdlalo.
Ama-Coral Bonus Offers and Promotions
• Ibhola le-Coral – umshuwalense omkhulu we-Acca – Beka isikhulisi sebhola semidlalo eyisithupha noma ngaphezulu ekubhejweni kwe-coral online futhi bazokubuyisela isigxobo sakho njenge-coral yokubheja yamahhala, uma izinketho ezingafika kwezintathu zikuvumela! Kufike ku- £ / € 25 ukubheja ngakunye.
• Umjaho wamaCoral – IMALI BACK uma ihhashi lakho liwa! Emuva ngokufunwa okudumile! Umdlalo odumile kunawo wonke uwukugxumela emuva kusizini yesizwe kaZwelonke. Ngabe kukhona okucasulayo ukwedlula ukubona ihhashi lakho liwa? Manje, ngokubheja kwe-Coral okumbozile! Amakhasimende abuyele ngaphakathi 1062 ukuhlulwa kwesizini edlule kanti okungenani ukuhlangana okukodwa usuku ngalunye kuzokufanelekela lokhu kunikezwa. Izimangalo zokubheja ama-Coral kulo mhlangano futhi uma ihhashi lakho liwa, kwehliselwe phansi, noma ungaqedi i-jockey – uzofinyelela ku- £ / € 25 ubeka emuva njenge-Coral yokubheja yamahhala. Kulula njengalokho!
• ICoral Acca Club – Beka amasayithi amane noma amaqembu ebhola ngaphezulu ACCA ukubheja ekubhejeni online, futhi uthole ukubheja kwamahhala kwamahlanu kwe-ACCA ibhola ukufana nesigxobo sakho sokuqala kuze kufike ku- £ / € 20!
Mane uthathe lezi zinyathelo:
Beka i-ACCA yakho yokuqala yokubheja ibhola
ICoral Coral inikeza 5 Ibhonasi ye-Acca
Umshwalense webhola • United ikakhulukazi lapho ukusabalala ukubhejela ezemidlalo, I-Coral ACCA (4-phinda noma ngaphezulu) kunoma iyiphi i-NFL noma i-NCAA American Football, futhi uma enye yemiphumela yakho yokudumaza, ukubheja ama-Coral kuzobuyisela imali esigxotsheni sakho njengokubheja kwamahhala kuze kufike ku- £ / € 25 ,
• Umjaho weGreyhound – eshaywe ubude noma Ngaphansi? Ukubeka ukubheja kuyo yonke imjaho bukhoma i-Sky Dog, futhi uma ukukhetha kokuqeda kwesibili, ukushaywa ubude noma ngaphansi, Ukubhejela Ezemidlalo kweCoral kuzobuyisela imali yakho njengokubheja kwamahhala kuze kufike ku- £ / € 25!
Ungayibeka Kanjani Ukubheja
Inqubo yokubeka ukubheja efanayo naleyo esetshenziswa ngubhuki omkhulu okuvezwe kulokhu kubuyekeza. Ukukhetha ukubheja, mane uchofoze intengo ingakhonjiswa ngokulandelayo imishini ethile yezemidlalo, futhi ukukhetha kuzovela ngokuzenzakalela kuslayidi yakho yokubheja ekhoneni lesokudla kwesikrini. Mane ungene ngaphakathi kunombolo oyifunayo yamasheya ebhokisini lesitoko, bese ubheka ukubheja futhi usebenzisa isithonjana semininingwane eluhlaza. Uma usenelisekile ngokukhetha kwakho, chofoza ku “Indawo Ukubheja” ukuqinisekisa.
Imifula iphinde isebenzise izici zokubheja ezisheshayo ezikuvumela ukuthi ubeke ukubheja okuncane ngomzamo omncane. Amathuluzi angeziwe angeziwe ayasiza kakhulu uma ufuna ukubeka inani lokubheja elihlukile kunenani elifanayo lamasheya. Ukwenza kusebenze isici, mane uchofoze ku- “VULA / VALIWE” Isikhethi, bese ukhetha kuqala ukubheja okusheshayo usebenzisa izinkinobho zezinombolo. Uma usenelisekile ngenombolo, thola ukubheja okufunayo bese uqhafaza emananini abonisiwe. okunye ukukhetha kuzongezwa ngokuzenzakalela kusiliphu sakho sokubheja, futhi ungaqhubeka nenqubo evamile yokubekelwa ukubheja.
Isici sokuphuma kwemali sicishe sibe luhlobo lwezici ezijwayelekile iningi lamabhuku ezemidlalo aku-inthanethi njengamanje avunyelwe. Imifula kodwa, kungenye yezindlela ezimbalwa zokubheja laphaya ezifaka inketho ekhethekile yokukhipha imali ekuvumela ukuthi ukhiphe ingxenye yezimali zakho ngenkathi ushiya amasheya amancane wangempela asevele elungiselelwe. Uyokwazi ukuthi inketho yokuphuma kwemali iyatholakala noma nini lapho ubona i-orange “Imali Ephumayo” Isithonjana sikhonjiswa eceleni kwamathuba entengo. Ukuze usebenzise lesi sici, mane uchofoze ku- “Imali Ephumayo” ezansi kwesilayidi sokubheja futhi uhlole intengo yokunikezwa kwemali ngaphambi kokuqinisekisa ukukhetha.
Ukuze ubone ukuthi inketho ethile yokukhipha imali iyatholakala ngokubheja okuthile, iya kusiliphu sakho sokubheja bese uchofoza “YIBA UKUZE NGINGAKHATHAZA” inkinobho. Lapha uzokwazi ukusebenzisa ithuluzi lesilayida esilula futhi uqoqe isilinganiso esikhulu 90% yesigxobo sakho sokuqala ngaphambi kokuba umdlalo owukhethile uphele. Ngalesi sici esikhethekile, ababhuki bakunikeza ngezinga elenenkululeko lenkululeko ekubekweni kwenqubo yokubekelwa ngokuvamile akuvunyelwe ngobuningi babhuki abaphambili.
Izindlela Zokukhokha Nezamabhange
Unezinhlobonhlobo ezinamandla zezindlela zokubhanga kumakhadi wesikweletu namakhadi asebhange angajwayelekile. I-PayPal, Skrill, I-Neteller, Eco, paysafecard neCoral Connect konke kuyatholakala njengendlela yokukhokha.
Idiphozithi eqala kusuka ku- £ nje 5 yazo zonke izindlela ngaphandle kwe-PayPal, okuyi- £ 10. Okwenziwayo kucutshungulwa ngaso leso sikhathi futhi akukho mali okufanele ukhokhwe.
Ungadonsela kulezi zindlela ngaphandle kwePaySafeCard. Ukuhoxiswa kungenziwa ngo- £ kuphela 0.01, okuyinto ephansi ongayithola, futhi sicabanga ukuthi zingabakhona kuphela ukubhejwa ezokwehliswa ngaphesheya kwebhodi.
Ukubhanga kuthatha izinsuku ezimbili, kodwa sibonile ukuthi kuvame ukucubungulwa ngokushesha. Ama-e-wallets afana neNeteller, Skrill ne-PayPal kushesha kakhulu. Okwenziwe okukhulu, ungasebenzisa futhi ukudluliselwa kwasebhange lapha, kepha kungadingeka ukuthi uxhumane nokwesekwa kwamakhasimende ukuthola lokhu kusetha.
Uma kukhulunywa ngokubheja kwamaselula, Ubuchwepheshe Ukubheja kwamakhorali kuhambisana nezindawo zokubheja eziku-inthanethi ezinhle kakhulu emhlabeni. Uhlelo lokusebenza lweselula lweCoral luhambisana nayo yonke inqubo yesimanje yokusebenza kweselula, ngakho-ke akunandaba ukuthi ungowaluphi uhlelo, uzokwazi ukwenza isipiliyoni sakho sokubheja ngale ndlela yokusika futhi wenze izixazululo zesoftware. Ngakho-ke, uma uvame ukulanda igajethi ye-iOS noma ye-Android yohambo, ungaphuthelwa ithuba lokufaka izinhlelo ama-Coral kuwo! Ukuze ugqugquzele abagibeli ukulanda uhlelo lwe-Coral ku-smartphone yabo, Ukunikeza abathengi bezemidlalo izincwadi zokuthi bazuze kuselula ekhethekile yokubheja iCoral. Ibhonasi evame kakhulu njengoba itholakala emakethe yokubheja kwebhola lezinyawo.
Uhlelo lokusebenza lwe-Coral Android lunikeza ukusetshenziswa okulula nokuphathwa. Ibonisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo futhi sisebenziseka kalula, lolu hlelo lokusebenza luzoba ukwengeza okuhle kunguqulo enhle yedeskithophu yesayithi. Lolu hlelo lokusebenza luhlanganisa inani elikhulu langaphambi komdlalo kanye nezimakethe zokubheja bukhoma futhi ivumela abasebenzisi ukuthi babukele imicimbi yezemidlalo online.
Woza! yethulwe njengewebhusayithi ku 2010, ekuqaleni ebheke emakethe yaseNordic, usebenze kanzima ukungena embonini yokuncintisana kakhulu. Zisebenza ngokuhlinzeka ngamadili ahlukahlukene ekwethembekeni kwamakhasimende, ukuthola idumela njengomkhiqizo ozobheka abantu abasebenzisa insiza njalo.
Zethulwe emakethe yase-UK 2014 futhi wazakhela igama lapha ngokuxhasa i-Accrington Stanley lapho ikilabhu selibuyela kwiFootball League.
Le nkampani izinze eMalta futhi isebenza nazo zombili i-MobileBet ne-GetLucky. Womabili la masayithi azoyeka nokunikezela ngezinsizakalo ngenxa yesinqumo sokusuka eNgilandi.
Sibutsetelo sokunikezwa kwe-Comeon
Lokhu akusho enye yezindawo ezindala zokubheja ezizungezile, kepha futhi akuyona entsha – ngakho-ke kunokuningi ongakunikela. Kunemidlalo engaphezu kwenkulungwane ehlinzekwa ekhasino. Lokhu kufaka phakathi izikhala, imidlalo ye-jackpot, imidlalo yetafula, bukhoma umthengisi imidlalo kanye poker. Isigaba sezemidlalo sihle nje nangaphansi 30 ezemidlalo zinikelwa nezinkulungwane zezimakethe ongakhetha kuzo.
Amakhasino aku-inthanethi e-Comeon isisulu esihlonipheke kakhulu esinenani elihlonishwayo lemidlalo. Akukho okulingana nezinye amakhasino aku-inthanethi amahle kakhulu, kepha babenomdlalo omuhle kakhulu wabahlinzeki bemidlalo abahamba phambili. Sekukonke kukhona cishe 1098 imidlalo. 968 zazo slot imidlalo, ngezinketho kufaka phakathi okwasendulo njengembali, Ufile noma Uyaphila no-Avalon II, ngaphezu kwemidlalo emikhulukazi efakwe ku-Guns N Roses ne-Planet of the Apes. Ungakhetha ezinhlobonhlobo zabathwali kufaka iNetEnt, I-Microgaming, I-Play’n Go, I-Yggdrasil nokuningi. Uma ufuna ukuzama ukuthola umklomelo omkhulu, lapho-ke ngeke ube kude nokuhamba ngokukhetha okuhle kwe-NetEnt slot jackpots kufaka phakathi irekhodi lalokhu kuhlukunyezwa kanye neMega Fortune Mega Fortune Dreams, kanye ne-mega moolah, Treasure Nile, I-Divine Fortune nokuningi. Lapha, umklomelo ungaba ezigidini.
Ngemuva kwalokho, kunjalo, sinokukhetha okuhle kakhulu kwemidlalo yetafula. Unokukhetha kwe 7 amatafula we-blackjack, kufaka phakathi i-Single Deck, Ukuvezwa kabili ne-Blackjack Pro. Khonamanjalo, bangu 7 amatafula e-roulette, kufaka phakathi iFrance Roulette, Roulette Okusha, I-European Roulette, I-American Roulette neRoulette Pro. Ungase futhi udlale komunye wemidlalo emithathu ye-video poker, noma ukhethe emidlalweni yetafula efana neTexas Hold'em, I-Baccarat, ICaribbean Stud Poker, Inja ebomvu, IPunto Banco noma iPontoon. Ngaphezu kwalokho, kune-RTP ejwayelekile ehle kakhulu kune 97%, okuyinto enhle – nokunye okuncane kwetafula okuphansi esikubonayo.
Indawo eyodwa ebalulekile ukuthi ube nekhasino lokuphila elihle. Iya ngokuya ithandwa futhi kanjalo, ukufakwa kubaluleke kakhulu. Ngenhlanhla, akuzange kudumaze. Bangu 24 imidlalo ongayikhetha isiyonke. Inikwa amandla kakhulu yi-Evolution Gaming, kodwa futhi uneminikelo evela kuNetEnt. Unenketho yemidlalo ebukhoma efana ne-Immersive Roulette, I-Blackjack ne-Live Football Exclusive Studio.
Kukhona nemikhiqizo emikhulu yokubheja yezemidlalo etholakalayo. Kufaka phakathi 29 ezemidlalo ezahlukene, kufaka phakathi Ibhola – nge 884 imakethe etholakalayo; i-basketball – ezemidlalo 238 izimakethe ezitholakalayo futhi ezingaziwa kangako njengeBandy. Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi umngcele wokubheja onesithunzi ongcono ngaphezulu 5.5% (ibhola lezinyawo ukuze 6%) futhi futhi kube nokuwina okuphezulu kwe- € 100,000 ngosuku, okuyinto enhle.
I-Sportsbook iyaqhubeka nokukhula, okuyizindaba ezinhle, futhi zinikela cishe konke okudingayo, kufaka phakathi ukubheja bukhoma. Impilo idlale kahle ngemidwebo ekhombisa ukuhamba kwesenzo. Ungase futhi ukuhlunga imakethe yempilo esizayo. Kukonke, umkhiqizo omuhle futhi ongcono.
I-Comeon Slots & Imidlalo
I-arhente yomdlalo we-Comeon unikeza mayelana 600 iziqu. Imidlalo yasekhasino ebonakalayo enikezwa abathuthukisi abahamba phambili emhlabeni wonke kubandakanya ukuthandwa kweMicrogaming, INetEnt, I-Play’n Go, I-Yggdrasil neThunderkick. Umdlalo wempilo usekelwa ngonjiniyela abanjengo-Evolution.
Imidlalo ebonakalayo, ikakhulukazi ama-slots, okwenza amaphesenti amakhulu kakhulu ezihloko ezinikezwa kule khasino eku-inthanethi. Benza 450+ izihloko ezihlukaniswe izigaba eziningana. I-Slots yevidiyo ethandwa kakhulu, kulandelwa imidlalo eqhubekayo noma ye-jackpot yekhasino. Ikhasino futhi inikezela ngemidlalo yetafula nokuhlukahluka kwayo.
Uma ungahlali endaweni enekhasino eyenzelwe umhlaba, khona-ke isigaba se-Beon Live Ukubheja sizokunikeza okuhlangenwe nakho okungalibaleki. Umdlalo uhlinzekwa kulesi sigaba ugeleza ngokuchazwa okuphezulu futhi usingathwe ngabasebenza ngama-croupiers bukhoma.
Amabhonasi Nomklomelo Wamasonto Onke
Woza! I-Casino inomoya wokupha uma kukhulunywa ngemikhankaso yokuphromotha. Lapho ubhalisa kuleli sayithi, uzoklonyeliswa ngenombolo enhle yama-spins wamahhala. Njengesipho esamukelekile sesekhondi, unethuba lokufuna a 100% kufinyelela ku- £ 25 kwidiphozi yakho yokuqala okungenani engu- £ 10! Kunjalo, iza nemibandela ethile nezidingo. Kufanele ubheje imali yesibambiso neyebhonasi 35 izikhathi, futhi lokho kufanele kwenzeke ngaphakathi 30 izinsuku. Cabanga ukuthi imali eyenziwe nge-Skrill, I-Neteller, I-PaySafeCard, I-Webmoney ne-Ukash ayifanele ukuthola ibhonasi yokwamukela!. Uma ufuna ukufunda imininingwane ethe xaxa, ungabheka ukubuyekeza kwethu ibhonasi yekhasino ye-Comeon.
Ukunikela ngokuqinisekile akugcini lapha, noma kunjalo! I-Comeon iyasiza kakhulu futhi iyaphana uma kukhulunywa ngabadlali futhi uzonikezwa ichibi elikhulu lezinketho! Into enhle ukuthi ukugembula kwekhasino kuneminye imikhiqizo eza namabhonasi nemincintiswano ethile. Ngazo zonke izindlela, ngeke uzisole uma ukhetha le khasino!
Bhalisa ku-Comeon Casino
Bhalisa kule sayithi mahhala, futhi ukubheja akulindelekile ukuthi kukhokhwe noma yini ohlelweni lokubhalisa kuze kube yilapho belungele ukwenza idiphozi yabo yokuqala. Ukubhalisa, abasebenzisi kufanele baye ekhasini eliyinhloko lendawo nakwesokudla sekhasi, bazobona ithebhu eluhlaza enelebula “Vula i-Akhawunti”. Ngokuchofoza ithebhu, bazokwaziswa ukuthi bafake imininingwane yabo. Isinyathelo sokuqala ukufaka igama labo lomsebenzisi, imeyili nephasiwedi. Ngemuva kwalokho bazothola ikhodi yokuqinisekisa ku-imeyili yabo enesixhumanisi sokuqhubeka nokubhalisa. Ngemuva kokuchofoza kusixhumanisi, ziqondiswe emuva kusayithi lapho kulindeleke ukuthi zifake imininingwane yomuntu siqu njengokuphaka kwesifundazwe nobudala.
Ubudala buyisidingo ngoba isiza sivumela kuphela abantu abangaphezu kweminyaka yobudala 18 iminyaka yokuzibandakanya nokuqukethwe kwabo. Futhi ngemuva kokubhalisa umsebenzisi angafanelekela ukuthola amabhonasi futhi aqale ukwenza ukubheja kwawo kokuqala. Lapho ukubheja sekuqedile inqubo yokubhalisa, bese bekhetha indlela yokukhokha abazoyisebenzisa ukwenza nokuthola izinkokhelo ngenkathi behlanganyela nesayithi.
I-Comeon Idiphozithi & Izindlela zokuhoxa:
Kulula ukulandela izindlela zokufaka nezokukhipha ze-Comeon ngoba isayithi lamukela ikhadi elihlukile lesikweletu noma lasebhange noma i-e-wallet. Uma uya esigabeni sokwesekwa, ungabona zonke izindlela zokukhokha, noma ngabe zamukelwa ngocingo yini, kanye nokukhishwa okuncane noma okuphezulu kanye nokuhoxa ongakwenza ngendlela ngayinye. Woza wamukele iVisa, I-MasterCard, I-Entropay, Skrill, INeteller nePaySafeCard enediphozi encane ye- £ 9. Yize ubukhulu buyehluka kuye ngendlela kuya endleleni kungafika ku- £ 8,000. Ukuhoxa kufanele kube ubuncane be- £ 18 kanti ubukhulu buyahluka. Khumbula ukuthi uma ufuna ukusizakala ngalesi sipho sebhonasi, kepha awukwazi ukusebenzisa i-e-wallet ukwenza idiphozi yakho.
Woza Mobile App
Njengoba sigcizelele ngenhla, Woza! bamba umunwe ekushayeni kwamathrendi ashisayo. Okunye ukukhuphuka okumangazayo kwenani labadlali abathanda ukusebenzisa ikhasino yeselula ne-sportsbook. Amakhasimende akwa-Comeon angakhetha ukudlala kumadivayisi wabo aphathekayo ngeplatifomu esuselwa kuwebhu (asikho isidingo sokulanda) noma ngohlelo lokusebenza leselula, itholakalela izinhlelo ze-iOS ne-Android. 2 phakathi 1 Uhlelo lokusebenza lwe-Comeon lunamakhulu ama-slots amakhulu weselula, imidlalo yetafula nokukhethwa kwabathengisi bukhoma. Ohlangothini lokubheja, ehlanganisa yonke imidlalo, Kokubili pre-match futhi bukhoma, etholakala kuzingxenyekazi zedeskithophu.
Konke ukubheja okuhle kakhulu kusebenziseka kalula, futhi uComeon uyingxenye yalobo bunye. umklamo obushelelezi, okuwuphawu lomkhiqizo, okwenza navigation lula. Ngaphezu kwalokho, isicelo siyashesha futhi siyaphendula. Lokhu kwenza kube ngumngane ofanele wabadlali abathanda imidlalo yekhasino ebukhoma nokubheja kwezemidlalo bukhoma.
Ulahlekelwe yimaphi amabhonasi we-Comeon nezenyuso ngokusebenzisa ukubheja kohlelo lokusebenza? Akunakwenzeka! Kwakunamabhidi agcwele endlu yamakhasino nezemidlalo. Empeleni, ngezaziso zohlelo lokusebenza ezinikwe amandla, kuzoba lula ngeComeon ukuhlinzeka ngokunikezwa okwenzelwe wena ngqo kuwe. Ngaphezu kwalokho, unenketho yokukhokha evikelekile (inketho ngokuya ngezwe lakho), nezitifiketi ze-SSL ezigxiliwe zokufihla yonke idatha yakho, ezokuphepha zisezingeni eliphezulu.
Izinzuzo ze-Comeon ne-Cons
Nazi ezinye izinzuzo zale nkampani yokubheja
• I-Welcome Bonus yale nkampani inomusa omkhulu.
• izidingo zokubheja kuphela 6 futhi 8 izikhathi – isibalo esiphansi uma kukhulunywa ngamabhonasi
• Inkampani yesicelo ephathekayo lokhu kubheja kungenye yezindlela ezinhle kakhulu emakethe
Manje, sizobona ububi bale nkampani yokubheja.
• Inkampani yokubheja inengxoxo ehloniphekile nokuxhaswa kwe-imeyili. Noma kunjalo, ayinayo inombolo yokuxhumana.
Yasungulwa 1997 njengenkampani encane yokuqalisa yase-Austrian ebizwa nge-betandwin ebisebenza kuphela 12 abantu, i-bwin isikhule yaba iziza ezinkulu zezimboni. Unyaka nje owodwa ngemuva kokungena kwayo, waqala isayithi lakhe lokuqala lokugembula online, ukugxila kakhulu emkhakheni wezemidlalo paris. Ngemuva kokukhula komkhiqizo wayo futhi yethula ukudlala i-paris, wagcina ngokunikela ngama-branched amakhasino aku-inthanethi 2001, kulandela lokhu 2003 ngokwethula inkundla yalo yemidlalo ethambile ebizwa ngokuthi “amabhola omlilo.” Ngonyaka owalandela, phakathi 2004, yethule i-poker yayo yabadlali abaningi bese in 2007 waqala imicimbi emikhulu yezemidlalo. Selokhu yakhulelwa, ukukhula nempumelelo kukhombisile ukuthi kusayithi elingathi sína futhi akuyona ingxenye yesikhalazo se-inthanethi samakhasino emakethe njengoba sizobona kulokhu kubuyekezwa.
Ukubuka konke ukunikezwa kwe-bwin
Njengesayithi lokugembula eliku-inthanethi eliqale njenge-Sportsbook futhi eliqashiwe, inikeza inani elikhulu lokuhlukahluka ngokuya ngemidlalo eku-inthanethi. Kunjalo, kukhona umxhwele wezemidlalo paris, okwakuyinjongo yayo yasekuqaleni. Noma kunjalo, ikhasino eku-inthanethi lihlaba umxhwele kakhulu, ukunikela ngamakhulu emidlalo, imishini yama-slot ejwayelekile imidlalo yetafula ejwayelekile ehola abahlinzeki bamagama afana ne-NetEnt. Ibuye ibe nekhasino ephezulu futhi ihlale kamnandi ngokuheha kakhulu i-poker ukuheha abadlali abaningi.
Okokuqala, ake sihlole amadili ahlukahlukene atholakala ekhasino eku-inthanethi. Kukhona cishe 300 imidlalo etholakala ekhasino, ngobuningi babo obungabesigaba sokuhlala. Sekukonke kukhona 243 iisethi zemishini yokudlala ukukhetha abahlinzeki abanjengoNetEnt, NYX Gaming. Ama-Elk Studios nokuningi. Khetha kokudumile okudala okudala, njenge-Starburst bese uzama ama-Gladiator asendle amasha futhi akhethekile. Uma ufuna ukushaya isikhathi esikhulu, ngakho-ke kukhona nokukhethwa okuhlaba umxhwele kwe- 61 imidlalo ehlukile ye-jackpot nayo, njengo Luck o jackpot neMelon Madness Deluxe. Uma ufuna ukuzama inhlanhla yakho emidlalweni yetafula, ungazama eyodwa ye 65 ukuthi le yekhasino kufanele unikele.
7 lishintsha isondo – kufaka phakathi i-bwin roulette yayo; 8 ukuhluka kwe-blackjack, njengoCharlie 7; 8 imidlalo ye-poker yevidiyo, kufaka phakathi iMega Deuces Wild neminye imidlalo yetafula, kufaka phakathi i-Craps classic, I-Golden Baccarat, I-King Triple Action Hold'em Poker, ITexas Hold'em, I-SP Vegas nokuningi. Uma ukhetha isenzo esincane sekhasino bukhoma, lapho-ke kukhona ikhasino enkulu ebukhoma enikezwayo, enikwa amandla yi-Evolution Gaming. Kunokukhethwa okuhle kwemidlalo lapha, njenge 3 i-poker yekhadi, umnyama, roulette, Ukuzilibazisa, i-baccarat ne-baccarat bayashesha ukubala ezimbalwa.
UBwin waqala njengobhuki futhi ungatshela ngokuzidela kwakhe okukhulu. Lapha ungafaka paris phezu 90 ezemidlalo ezahlukene eziningi ongakhetha paris atholakalayo ngawe. Ngokuqondene nezimakethe ezitholakalayo, isiza saseParis nakanjani siphezulu komdlalo. Ungabheja kwezemidlalo ezinjengebhola, kanye nezinye ezifana nokuhamba ngebhayisikili, I-F1 ne-rally.
Kukhona futhi ithuba lokubeka ama-paris emicimbini yezepolitiki neyokuzijabulisa. Noma kunjalo, ngenjwayelo, ukubheja kumaphakathi ngokuqhathaniswa, mhlawumbe bazofika ngamanani afana nabanye ababhuki abaningi. Lokho kusho, kubuye kwezemidlalo paris izinga eliphezulu kakhulu futhi ungaphila ukusakaza imicimbi emikhulu emhlabeni wonke.
I-Bwin poker iheha abadlali abavela ezindaweni zonke futhi ingenye yezindawo ezihola phambili ze-poker online emakethe. Inenombolo enkulu yemidlalo nemiqhudelwano engabamba iqhaza kuyo, kanye nokujoyina imicimbi efana ne-Challenge FastForward, i- £ 15,000 Rake Race and Sit & Iya kuJackpot 3 isandla. Hhayi kuphela i-poker enikeza zonke lezi zinketho, kepha kukhona futhi ukukhushulwa okuningi okunikezwa njalo, kufaka phakathi ukunikezwa kwemali emuva, abakhi bamabhonasi, ibhonasi yokwethembeka nehora elijabulisayo nsuku zonke. Lapha uzothola ukuboniswa okukhulu kakhulu, imiqhudelwano yamahhala yamahhala nsuku zonke futhi okunye kokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kwe-poker nxazonke.
Ukubheja bukhoma nokusakaza bukhoma
Ngokuqinisekile iBwin ingubhuki ozinikele uma kuziwa ekunikezeni izimakethe ezahlukahlukene zokubheja kulo mdlalo, okufana nakho konke okwaziwayo kuphela okuthuthukisa ulwazi. Ziningi izimakethe zokubheja ngqo-ukukhetha, ngezibalo ezahlukahlukene zokubukwa ngomzamo wokusiza amazinga okuphumelela kokubheja kwakho. Amakhasimende nawo angashintsha phakathi kokubuka komcimbi nokubuka okujwayelekile, okuvumela ukuthi uqhubeke namaqembu abo akhethiwe neminye imicimbi. Lokhu kunakwa kwemininingwane kuphakamisa ukuthi babeke isikhathi esiningi nomzamo kule ndawo kabhuki.
izinketho ze-bwin bukhoma ngokungangabazeki zingenye yezindawo zayo zokuthengisa lapho kuziwa ekuheheni amakhasimende amasha, kusiza ukuqeda amanani abo adumazayo anikezwayo. Ibhola laseYurophu linayo iBwin, ngemidlalo eminingi, itholakalela ukubukwa isonto lonke kusuka emazweni ahlukahlukene. Abasebenzisi kumele okungenani babe ne- 1 I- £ ku-akhawunti yakho ukusebenzisa le nsiza enhle, ithenisi nemidlalo yaseMelika enikela kakhulu. Umthamo wokuzibophezela nokwenza ezemidlalo ukubuka ikhwalithi ephezulu kuyakhanga kubathengi abaningi, ebavumela ukuthi basebenzise ngokushesha izinguquko emdlalweni. Imifula yekhwalithi ephezulu kakhulu, futhi kuvame ukuba nokuphawula okuhambisana nakho, Ukusakazwa kwenkonzo bukhoma i-Bwin ingeyesibili kulokhu. Amashejuli abukhoma ansuku zonke ayatholakala kumakhasimende ukuhlela ukubuka kwawo ngezimakethe zokubheja bukhoma ezifinyeleleka kalula kusuka kulawa makhasi.
Umjaho wamahhashi amaningi
Njengoba ungalindela ekunikezelweni kwemijaho yamahhashi ikakhulukazi iBwin, hhayi kuphela ngezinsuku zase-UK zosuku lomjaho kepha nemicimbi yamazwe omhlaba efana neKentucky Derby neBreeders Cup. Umjaho weMeydan ne-Australia nawo ufakiwe.
Ukubhaliswa kweBwin: Kulula futhi kulula
Iningi lezingosi zokugembula ziqinisekisa ukuthi inqubo yakho yokubhalisa ithatha imizuzu embalwa ukuqeda ukuze amakhasimende amasha angalingeki ukusuka kude nekhasi, kanti uBwin uhlukile. Akuzona izinto ezijwayelekile ukungena, njengegama lakho, ikheli le-imeyili, I-Postal Code, Ikheli lesitaladi. Futhi kufanele ukhethe iphasiwedi negama lomsebenzisi le-akhawunti yakho. Yilokho kuphela.
Lapho usunayo i-akhawunti eBwin, ungaphatha uchungechunge lwezinguquko maqondana nephrofayili yabo. Ngokwesibonelo, ungakhetha ulimi; Ukunikezwa kukaBwin 17 izilimi, kusuka eJalimane kuye eRussia, IsiNgisi, IsiBulgaria, IsiDanish, IsiFulentshi, ISpanishi, IsiNtaliyane, IsiRomania, IsiTurkey nokuningi. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha ukuphuma ekuboniseni izithombe eBwin. Lokhu kuzokwenza ukuthi isayithi lilayishe ngokushesha. Okwamanje, unikezwa nethuba lokukhetha ukuthi uyawathola yini ama-imeyili avela kubhuki ngemininingwane yokubheja – kubhejwa kufakwe futhi banqobile.
Ngaphezu kwalokho, ungasetha umsebenzi we “ukubheja okujwayelekile”. Uma uthambekele ukudlala inani elifanayo lemali akunandaba ukuthi ubheja yiphi imicimbi, bese umsebenzi we “ukubheja okujwayelekile” lokho kuzokusiza wonge isikhathi. Okokugcina, ungashintsha usuku nefomethi yesikhathi, futhi cishe noma yini ongayicabanga.
Ngabe sishilo ukuthi ungasetha imingcele yabo yediphozi? UBwin ubeka okwakhe futhi unikeza inkululeko enkulu. Ingxenye ehamba phambili ukuthi zonke lezi zilungiselelo zingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi. Lesi isici esisebenzayo. Amathuba ukuthi ngemuva kwesikhashana ungahle ufune ukwenza izinguquko ezithile kuphrofayela yakho, futhi ube nethuba lokwenza njalo noma nini lapho uzizwa sengathi kuyinzuzo enkulu.
Ukuphela kwento engeke ishintshe uma uvula i-akhawunti eBwin UK yimali. Okuthokozisayo ukuthi ngeke utshelwe ukuthi ukhethe imali yakho kwirejista; Esikhundleni salokho, lokhu kwenziwa lapho unquma ukwenza idiphozi yakho yokuqala. Siphakamisa ukuthi ukhethe ngokuhlakanipha ngoba uma usuthathe umhlalaphansi, akusekho ukubuyela emuva. Ukungeza lokho akuvunyelwe ukuba nama-akhawunti amaningi kusayithi, kubalulekile ukuthi imali oyikhethayo izosetshenziswa ezinyangeni ezizayo.
Amaphromoshini namabhonasi ku-bwin
Ngaphezu kwalokho, ekubuyekezweni kwethu, nalu olunye ulwazi mayelana nomklomelo we-lottery.
Akunakusho, amabhonasi okubhalisa anikezwa abasebenzisi abasha kuphela. Kumele kuqashelwe ukuthi akunenzuzo njengokuphakanyiswa okwamukelekayo kwamanye amasayithi. Lapho ubhalisa futhi wenze idiphozi yakho yokuqala okungenani i- £ 10, bwin uzokhipha ibhonasi yokufanisa ye 100%, okukuvumela ukuthi uwine kuze kufike ku- £ 20.
Ngaphambi kokuthi ukhiphe ibhonasi ku-akhawunti yakho ye-Bewin, kufanele ugingqe amabhonasi womabili bese ufaka idiphozi okungenani kahlanu ku 1.70 noma isithiyo esiphezulu. Eminye imigomo nemibandela. Ufuna ukuyifunda ngokucophelela ngaphambi kokufuna ibhonasi, ngakho-ke awugcini ngokuzibuza ukuthi kwenzekeni. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi imigomo kufanele igcwaliswe ngaphakathi 90 izinsuku ngemuva kokuthola ibhonasi.
Ukuze ufunde ngokunye ukukhushulwa kwamanje eBwin UK, udinga ukubhalisela incwadi yabo yezindaba, futhi uzothola imininingwane ngamaphromoshini ahlukahlukene njalo.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngeBwin yindlela elula ngayo yokwenza ukubheja. Lapha sizokuchazela ukuthi kulula kangakanani. Okokuqala nje, kufanele uqinisekise ukuthi ubhalisile futhi ubhalise i-akhawunti ne-bwin futhi ufake nemali kwi-akhawunti yakho. Lapho-ke uma usunemali eyanele ku-akhawunti yakho ukumboza ukubheja ofuna ukubeka, ungathola umdlalo ofuna ukugembula kuwo ngokubonisana nohlu lwe-a-z ohlangothini lwesobunxele lwekhasi. Uma usutholile umdlalo owuthandayo, imakethe izokwehla, bese uma uqhafaza kwiligi noma umncintiswano owuthandayo, ungasesha lolu hlelo ozithandayo.
Uma usemcimbini ungathola imakethe ofuna ukubheja kuyo, futhi uma usuchofoza kuyo, ukubheja kuzongezwa kusiliphu sakho sokubheja ohlangothini olungakwesokudla kwekhasi. Lapho-ke sekufakiwe, mane ufake inani lemali ofuna ukuligembula ebhokisini lesigxobo. Lapho usubona ukuthi ukunqoba kungenzeka kuvele kwanele wena, ke kufanele ukwenze ukucindezela inkinobho ibeka ukubheja okukhulu.
Landa & Usebenzisa bwin Izicelo zeselula
Njengoba kushiwo ngaphambili, I-Bwin Ukuqinisekisa uhlelo lokusebenza lweselula ukuthi amakhasimende awadingi ukuphuthelwa ithuba lokuwina lapho engekho kukhompyutha yabo. Itholakala kubasebenzisi be-Android ne-iOS, uhlelo lokusebenza lukhululekile ukulanda, ngazo zonke izici ezifanayo ezitholakala kusiza sedeskithophu zisatholakala, kufaka phakathi ukusakaza bukhoma nokufaka bese ukhipha imali kwi-akhawunti yakho. Kwenye indawo kwisicelo, ikhasimende likhululekile ukusebenzisa i-'Betfinder’ isici, okuvumela abasebenzisi ukuthi bathole ngokushesha imakethe yabo yezemidlalo abayithandayo. Okunye okuhle okutholakalayo kwizicelo zeselula ze-bwin yikhono lokwamukela ushintsho ekungqubuzaneni, okukuvumela ukuthi uthole amathuba aphezulu uma ekhula njengoba ubeka ukubheja kwakho. U-‘PROTEKTOR’ isici sisiza ukuqinisekisa ukuthi amasheya akho engxenyeni ethile yokubheja alahlekile futhi nolunye uhlelo lokusebenza lokuthakazelisa.
I-Betfair iyona eshintshana enkulu kunazo zonke emhlabeni we-paris inthanethi futhi isuselwa eGibraltar, ngakho-ke yonke imisebenzi yesiza ilawulwa futhi ilayisensiwe nguKhomishani Wokugembula waseGibraltar ngaphansi kukaLwesine 2005 Isenzo.
Bakwazi futhi ukuthola ilayisense ye-UKGC ukuze isetshenziswe ngokukhululeka e-UK. Ngokuyisisekelo lokhu kusho ukuthi isiza silawulwa izinhlangano ezimbili ezihlonishwa kakhulu ezingathenjwa. Imibandela yelayisense izosho ukuthi iBetfair:
Qinisekisa ukuthi izingane zingasebenzisi indawo yomdlalo, aze abe mdala ngokwanele ukuqonda izingozi azithathayo.
Qiniseka ukuthi zonke izenzo zabo zilungile kubo bonke, futhi esobala kuwo wonke umuntu.
Nikeza usizo kunoma ngubani onenkinga yokugembula ngemuva kokusebenzisa isiza sakhe.
Kusukela ngama-paro amathathu we-paris ku-Betfair punter vs transaction akuzona i-punter punter vs ubhuki ongaphila ungazi ukuthi izinkokhelo ziqinisekisiwe ukuthi iBetfair ibambe imali ngenkathi ukubheja kwenzeka.
Njengenkampani ethengiswa esidlangalaleni, ngenzuzo ezigidini, awudingi ukuthi ukhathazeke ngoholo lwemali lwezinto noma kubhuki.
Ukubuka konke okunikezwayo kusuka kuBetfair
Izithombe zicutshungulwa yiCodeCarvings Piczard ### I-MAHHALA Yomphakathi Ekhululekile ### kuvuliwe 2019-10-05 08:45:13nge | http://piczard.com | http://knebedias.com
I-Betfair yaqala encane futhi yadala ukuhlangana namanye amagama amakhulu ku-inthanethi yaba yi-gior yomdlalo. Manje inikeza Slots eziningana, online yebhingo, inani elikhulu lemidlalo yamakhadi nemidlalo yetafula, kufaka ne-blackjack, roulette, baccarat, USic Bo, nemidlalo ye-poker enhle kakhulu
IBetfair ingelinye lamagama aziwa kakhulu emhlabeni jikelele e-United Kingdom online, sibonga inani lemikhangiso yethelevishini ephezulu. Ziyakwazi ukushintshana okukhulu kakhulu kwe-paris okusebenzayo kakhulu emhlabeni futhi kune-liquidity enhle ngezimpawu zazo ezihlukile. Lezi izi:
INational Rugby League
Ziphinde zinikeze izimakethe ezintweni ezingabonakali kakhulu, njengezepolitiki nochungechunge lwethelevishini.
Ngaphezu kwenani elikhulu lemakethe, ukujula ukuthi lezi zimakethe nazo zihlaba umxhwele. Uzokwazi ukuthola ukungezwani kwabadumile kakhulu yonke indlela kuye kumidlalo engabonakali kakhulu njengokumbozwa okunikela ngezinhloso ezibandakanya.
Bheka nje izikhangiso zebhola zikhombisa lokho – ngesikhathi sokubhala, banemihlangano phakathi kwamaqembu aphesheya ahlelwe ukungezwani okulandelayo kwiligi yaseChile! Azigcini nje ngokuba nobukhulu obuyisisekelo – yonke imidlalo inokuhlanganiswa okugcwele, ngobuningi be-paris ehlanganisa izinketho zombili futhi zibeke emuva.
Kunjalo, okucashile kakhulu uma ubeka ukubheja ongaphansi kwe-liquidity kuzoba. Le yinkinga engathinti izimakethe eziningi iBetfair futhi uma uyiqhathanisa nezimbangi zayo eziseduze neBetdaq kuyacaca ukuthi iBetfair ingabaholi bemakethe..
Kungase kunganikeli imidlalo eminingi njengeminye imidlalo emihle yasekhasino laphaya, kepha imidlalo ayinikezwayo iyathandwa futhi iyahlukahluka, nokuthile kuwo wonke umuntu. Inikeza okungaphezulu kwalokho 200 imidlalo yokudlala kwikhasino ebonakalayo eduze nekhasino bukhoma. Inikwa amandla yi-Playtech futhi ikunikeza ithuba lokudlala imidlalo yabo emikhulu nehamba phambili. Ikhasino linikeza inhlonipho eyanele 116 imishini slot video, esukela emidlalweni eyaziwayo ye-Playtech classic Wacky Waters imidlalo emihle kakhulu nethokozisa kakhulu ye-jackpot efana ne-Adventures eWonderland Deluxe. Ine 33 imidlalo ye-jackpot isiyonke.
Uma ufuna imidlalo yetafula, bese kuba nezinqumo eziningi. Ine 19 amatafula amahle e-roulette, 10 imidlalo emnyama, 2 imidlalo ye-baccarat, Pontoon, I-Casino Hold'em, 3 gabisa amakhadi, ICaribbean Stud Poker, Sawubona Izikweletu Zokugcina, USic Bo futhi 8 imidlalo ye-poker. Omunye wemikhiqizo edume kakhulu eBetfair amakhasino ayo abukhoma. Nakulokhu, inikwa amandla yiPlaytech futhi inikeza imidlalo efana neBaccarat, Blackjack, I-Roulette ebukhoma, I-Poker ebukhoma, Phila 3 I-Card Brag, Phila Sawubona-Lo. Inengqikithi ecishe ibe 50 Amatafula bukhoma ngakho-ke khetha ukuthi kukhona okuthile ofuna ukukudlalela kusuka emakethe yasekhasino bukhoma futhi uqhubeke ngokushesha.
Ngemuva kokuhlanganiswa nePaddy Power, le indawo ongafunga ukuthi iBetfair iyadlula, futhi yena impela. Ungomunye wababhuki aziwa kakhulu emhlabeni. I-Sportsbook yayo inikwe amandla yi-OpenBet, okusho ukuthi kubushelelezi obuhle bezemidlalo paris.
Yinkampani eyazi ukuthi inganikeza kanjani insizakalo enhle kakhulu. Ububanzi bezimakethe ezitholakalayo ukubheja kumanani akhe amakhulu namathuba uvame kakhulu ukuthandwa kakhulu oyokuthola emakethe online. Ine 33 ezemidlalo nokubheja kanye nohlu lwezinketho ze-paris uma ukhetha ukubheja emiphumeleni yemeshi, ingqikithi ephelele nokunye okuningi. Kuningi kakhulu kumdlalo wangaphambi komdlalo kanye nokudlala kuyatholakala, ungakwazi ukujabulela ukusakazwa bukhoma, izinketho zokuqoqa kanye nokusakazwa okungapheli kokukhuthaza okukhulu ukuwenza uthokoze ngokwengeziwe.
IBetfair Poker isebenza yiThe Sporting Exchange Ltd. kanye nengxenye yenethiwekhi ye-iPoker. Inedumela elihle kakhulu futhi isizinda sokuqina somdlali ngenxa yesoftware yayo ehloniphekile nokuphakanyiswa okuhle. Inikezela ngemihlobiso ehlukahlukene nge-buy-ins kusuka kumaphawundi ambalwa kuya kwamakhulu ama-roller aphezulu laphaya. Ihamba ngemiqhudelwano yansuku zonke ngamachibi wemiklomelo afinyelela ku- £ 200,000. Phezu kwalokho, kugijimisa okuhle konke kuma-satellites bukhoma ukwenza imicimbi ye-poker, kufaka phakathi i-WSOP, I-WPT ne-EPT. Iphinde ibe neBetfair Live! Obani abahamba bebheka imicimbi yamazwe ase-Europe. Ngaphezu kwalokhu, kuzodlula 30 imiqhudelwano yamahhala masonto onke.
I-Betfair inikeza izici ezithuthukile, ukukhushulwa futhi kuqedwa nge-gameplay engakhawulelwe. Indawo inikwa amandla ngabasizi be-Playtech, I-Fusion Virtue ukuze imisebenzi isezingeni eliphakeme ngezikhathi zomthwalo osheshayo kanye nemidwebo ecacile. Indawo yokubhalela yebhingo inikezela ngemidlalo ehlukahlukene ukwenza ukuthi uhambe. Kunesixuku se 90 imidlalo yebhola futhi 75 imidlalo yebhola, kanye nezinye ezikhethekile nezijabulisayo. Ungaguqula futhi ujabulele imidlalo yeRoller Coaster noma yama-dodgems nomdlalo wabo othandwa kakhulu, ukubala amashubhu. Uma ufisa okuthile okuhlukile, khona-ke ungahamba uyodlala Slots okufanele unikeze. Uma kukhulunywa ngebhingo, Ngokuqinisekile iBetfair ingeyakhe.
Abadlali be-Casino bangakhetha phakathi kwamabhonasi amabili ahlukene owamukelayo kudiphozi yabo yokuqala:
100% kuya ku $ 100 ukuze isetshenziswe kuyo yonke imidlalo yasekhasino
200% kuya ku $ 400 ukudlala Slots kuphela
Ngokusobala, Kunzima kakhulu ukusula ibhonasi edlala Slots. Noma kunjalo, uma ufuna ukukhulisa ibhonasi, Lokhu kuseku ukubheja kwakho okuhle kakhulu. Ngomuntu, Ngikhethe ukwenza idiphozithi yami yokuqala nomdlalo webhonasi paris, njengoba nganginomuzwa wokuthi kunginikeze ithuba elihle kakhulu lokuphumelela, noma iprimiyamu ibiphansi kakhulu.
Kwibhonasi yenza okulandelayo:
Betfair.com VISIT ngokuchofoza kulesi sixhumanisi (izovula kuthebhu entsha yesiphequluli).
Chofoza inkinobho “manje faka isimangalo” luhlaza noma isixhumanisi “Bhalisa” ekhasini lasekhaya.
Gcwalisa yonke imininingwane eceliwe bese wenza igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-akhawunti yakho.
Inkambu yekhodi yebhonasi kufanele igcwaliswe ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kwalokho sebenzisa ikhodi: ZBBC01
Ngena kwi-akhawunti yakho esanda kudalwa bese ubeka idiphozi 10 noma ngaphezulu usebenzisa indlela oyithandayo.
Beka i-5x £ 10 Paris ezimakethe ezahlukahlukene ngokungahambisani 1.50 noma ngaphezulu futhi lokho kuzokhubaza i-£ 20 khulula ukubheja Sportsbook.
Phinda inqubo kuze kufike ku- £ 100 Kukhululwe i-paris yamahhala.
Ibhonasi ebukhoma yeKhasino
Ibhonasi yemidlalo yabathengisi ebukhoma ihluke kancane. Ngenkathi ibhonasi kuphela 50%, esiphezulu $ 200, futhi niyemukela 5 amathokheni okudlala i-roulette ebukhoma. Ngiyalithanda leli bhonasi ngoba lidinga ukuthi abadlali bazame imidlalo ebukhoma, okuyinto, njengoba ngachaza ethandwa kakhudlwana emkhathini.
Uhlelo lweBetfair VIP
Uhlelo lweBetfair VIP lungenye yemininingwane enolwazi futhi enobungane kakhulu njengoba ngike ngahlangana nesikhathi sami ukuhlola amasayithi okudlala online. Inkampani ikuqonda kahle ukubaluleka kokujabula, amakhasimende athembekile. Kunamazinga amathathu wohlelo lwe-VIP, ngamunye unezinzuzo zawo. Uhlelo olumangalisa kakhulu uhlu olude lwemicimbi ye-VIP iBetfair imeme abadlali be-VIP ukuthi babambe iqhaza. Bheka uhlu lwezindawo abaye kuzo ngaphambili:
• I-Royal Ascot
• I-Monty Python Live
• IBritish Grand Prix
• I-Champions League Final
• Umkhosi weCheltenham
• I-Classic (Real Real vs Barcelona)
• ICirque du Soleil
• I-International Rugby
• I-TP World Tour Tennis
• I-NFL International Series
Kepha mina, yilezi zinhlobo zemicimbi nezinzuzo ezingewona amabhonasi ezihlukanisa nalo lonke uhlelo lweBetfair VIP; lezi yizintengo abadlali abangakwazi ukubeka inani langempela ngoba bazimisele kakhulu. Kufanele uhlole yonke imininingwane yohlelo kuwebhusayithi yabo.
Idiphozithi nolwazi lokuhoxisa
Kunezindlela eziningi zokufaka nediphozi zokuhoxisa ezitholakala eBetfair Exchange. Zonke izikweletu ezinkulu izindlela ezamukelwe kufaka phakathi amakhadi wedebithi, amakhadi wesikweletu, nama-eWallets izaphulelo ezikhokhelwa kuqala.
Izindlela zokukhokha ezitholakalayo zifaka phakathi:
• Ikhadi eliphezulu
• Khokha i-Pal
Yazi ukuthi iBetfair ikhokhisa imali yokushintsha ukusetshenziswa kwezindlela ezithile zokukhokha.
Uhlelo lokusebenza lwe-Betfair: Imishini eminingi ehlukene yama-slot
Ngokuthandwa kwamakhasino eselula ngokushesha okukhulu, kanye nezimakethe eziningi, kuyabandakanyeka kuyo, kubalulekile ukuthi ihlinzeke ngohlelo lokusebenza lweselula ukulandelela okusele. Akunakuba ngomdala kunabo bonke endaweni yesehlakalo, kepha wathatha, wabamba kahle. Uhlelo lokusebenza lweBetfair lulandelwa ku-Android naku-iPhone, ngakho-ke iningi labathengi bezimakethe zamaselula namuhla. Ngekhasino ephathekayo, ayinikezi ngqo amabhonasi afanayo lawo abadlali bathola isikhundla, kepha isanikeza abaphathi bayo abaningi izinkokhelo eziningi njengomvuzo wokuhamba mobile.
Akuzona izinhlelo ezibonakala zikhangeleka kakhulu laphaya, kepha inikeza okuningi ukuze kuxolelwe lobu buthakathaka. Ibushelelezi futhi ivumelana nezimo futhi ithembekile ngokuphelele. Inikeza ukusebenzisana, okusho ukuthi awugcini ngokushaywa kusuka esikrinini esisodwa kuya kwesinye njengokuningi kwalokho okudingayo kuyatholakala kusikrini esisodwa. Kukhona cishe 100 imidlalo etholakalayo ukuze idlalwe kuselula futhi iningi lemidlalo liyis Slots, lokhu kufaka phakathi i-Top Gun, I-Gladiator, Inkathi yenkosi yemvume yokuhlonipha uNkulunkulu nomhlophe uJohn Wayne ukusho abambalwa. Noma kunjalo, ungadlala i-roulette, imidlalo emnyama neminye imidlalo yetafula. Unikezwa nxazonke 20 imidlalo ye-jackpot, kufaka phakathi i-jackpot enkulu enamandla. Uhlelo lokusebenza le-mobile Betfair liyindawo enhle yokuthatha indawo ye-site futhi likwazisa njalo ukukunikeza kwalo ukuze lungeze ekujabuleni kwakho.
Njengoba isungulwe emuva ku- 1999, phezulu ekhaya manje ungomunye wabadala bomkhakha wezemidlalo online.
Le nkampani izinze eDüsseldorf, EJalimane, kepha futhi unamahhovisi ku
I-Austria, IMalta neGibraltar. Iwebhusayithi yabo ikude nokubheja indawo elula yezemidlalo
njengoba futhi kunikeza amakhasino amakhulu e-intanethi nemidlalo yama-virtual.
NgoJuni 2018, inkampani iyaqasha 299 abantu futhi inezigidi ezingaphezu kwezigidi ezinhlanu
amakhasimende abhalisiwe. Le nkampani ibe nezivumelwano eziningi zokuxhaswa kwebhola
ngokuthandwa kweRed Bull Salzburg, I-Austria Vienna, UHertha Berlin, IBorussia
I-Monchengladbach, USt Pauli noRCD Mallorca. Iphinde yaxhasa imicimbi ku-
eminye imidlalo efana nethenisi, i-handball ne-hockey yeqhwa, ukuzibeka njengomuntu munye
yemikhiqizo eyaziwa kakhulu eYurophu.
Leli sayithi ligunyazwe ngokuphelele yiKhomishini Yezokugembula e-UK nase-
Isiphathimandla Sokugembula saseMalta, ngakho-ke abadlali bangaqiniseka ukuthi lokhu akuwona umkhonyovu
indawo. Kulesi ukubheja ukuze ubuyekeze ikhaya, sizobheka ngokujulile isayithi, nge
ukugcizelela ikakhulukazi ukukhushulwa kwayo, isipiliyoni seselula, security kanye
Kunebhonasi enkulu eyamukelekile yokubheja ekhaya lapho ubhalisela
Ukubheja-Ekhaya, okuyimpumelelo a 50% ibhonasi kuze kufike ku- € 50. Isikhangiso siyakhangiswa
njengomdlalo € 50 ibhonasi, kodwa uzothola le mali uma ufaka i- € 100 noma
Okuningi. Ngakho-ke ungakhohliswa ngokucabanga ukuthi ibhonasi ezenzakalelayo ye- 50 €. Ku
jabulela ukunikezwa kokubhalisa, mane ubhalise uphinde ulayishe ukubheja kwe-akhawunti yakho;
Ngemva kwalokho, chofoza ku “Sebenzisa ibhonasi” ngaphansi “I-akhawunti yami”;
bese ufaka ikhodi yebhonasi “OKOKUQALA”, lapho-ke bazodumisa 50% kwe
inani elikhokhelwe ukubheja kwe-akhawunti yakho.
Lapho ufaka isicelo, qiniseka ukuthi uqonda imigomo ehlotshaniswa nebhonasi. Wena
kumele kusebenze ngaphakathi 90 izinsuku zokuthenga, ke udinga ukuhambisa idiphozi
isamba kanye nebhonasi amahlandla amane ngokungenani okuncane kwe 1.7 ngaphambi kokuthi ukwazi
hlenga imali. Ngakho-ke uma ufaka i- € 100, udinga ukukhuphuka kuphela 600 (idiphozi
ye 100 € + 50 € ibhonasi) x 4 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi.
Ngokuphathelene nokubheja kwezemidlalo ibhonasi ibhonasi ehloniphekile uma iqhathaniswa nezinye izimpawu-up
ukubheja okunikezwayo laphaya, noma ngabe kufanele usebenzele ama-winnings akho.
I-Bet-at home inokukhushulwa kokubheja lapho inikezela khona 50 € kwenye yayo
amakhasimende akhethiwe nsuku zonke. Noma kunjalo, uma ingakhululwanga iyagingqika, ukuze
umuntu okhethiwe ngokulandelayo 100 € bese ululama. Lokhu kungaqhubeka kuze kufinyelele
Ngaphezu kwe 1,000 € uma amaklayenti akhethiwe eza futhi afune imali. It
impela ngikunikeze okuthile ngeze – ukusayina nje.
Ngithumele amashumi ayisithupha
Enye imali yokuphromotha ngezikhathi ezithile umkhankaso we-Sixty Send me. Ukubheja Ekhaya kuyinto
ukuthumela 60 € ngosuku nge-SMS. Ukuze ube yithuba lokuthola imali konke onakho
yenza uthayiphe inombolo yakho evumelekile yocingo futhi uzokwazi ukubamba iqhaza. Wena
kungenzeka yini ukuthi umgibeli onenhlanhla angahleki othola okuhle 60 € ithunyelwe efonini yakho.
Le ibhonasi yokubheja ekhaya ekhaya yabathengi abaningi abanolwazi laphaya. Inyanga ngayinye
ukunqunywa kweBetmaster kuyabandakanyeka futhi njengekhasimende, ungathatha ngokuzenzakalela
ingxenye. Njalo ukubheja okuphumelelayo uzibona ukhuphuka ngezinga, kanye namathuba
ukubheja okutholayo, amaphuzu amaningi owafumanayo usiya phezulu. Uma kunjalo
enye yokuqala 3 izinyanga, bese kubheja ukuthi uzovuzwa ngokubheja okuhle.
Bhalisa eBet-At-Home kulula futhi kuzothatha imizuzu embalwa ukugcwalisa
Ngaphambi kokuthi singene ngemininingwane, kufanele kuqashelwe ukuthi ungangena ngemvume usebenzisa i-
kungaba i-Akhawunti yakho yeGoogle noma i-akhawunti yakho ye-PayPal. Isebenza ngokuxhumanisa i-
imininingwane nemininingwane enikezwe noma iyiphi i-akhawunti ngaphambi kokukuvumela ukuthi usayine
ekusebenziseni lolo lwazi.
Kufanele kungezwe ukuthi kuzodingeka ungeze izinketho zebhange ngokwehlukana uma
sebenzisa le ndlela, kepha yilokho okuvele kuyinqubo elula ngisho elula.
Uma udinga ukufaka imininingwane yakho, uqala ngokungeza imininingwane efana negama,
ikheli, izwe, nolwazi lokuxhuma njengephasiwedi nokuphepha
imibuzo. Uzodinga ukuzihlola ngasikhathi sinye, ngakho-ke qiniseka ukuthi bakhona
Ingxenye yesibili yenqubo ikuvumela ukuthi usethe imikhawulo ye-akhawunti uma ufuna.
Uma konke lokhu sekwenziwe, kuzodingeka ukuthi uqinisekise i-akhawunti yakho. Ukusetshenziswa kwe-Bet-At-Home
I-Jumio exhumanisa noma i-smartphone noma i-camera notebook yakho. Udinga nje
cela ukuyibhala ngaphambi kwekhamera bese uthatha isithombe.
Qaphela ukuthi awudingi ukwenza lesi sinyathelo ngokushesha uma ungenayo
imibhalo esesandleni. Kepha ngeke ukwazi ukubheja noma ukufaka imali kusayithi kuze kube
uhlolile. Lokhu kungahle kubonakale kuyinto encane, kepha kujwayelekile embonini
manje yinto ebuzwa ngubhuki.
Njengomvuzo omncane wokusayina, kufanele kuqashelwe ukuthi uzokwazi
thola 5 ama-spins wamahhala kunani le-slot £ 0.50 Starburst phezulu. Izikhala zamahhala zizoba
kufakwe ku-akhawunti yakho ngokushesha nje lapho uhlolile, futhi into enhle kakhulu ukuthi
azikho izidingo zokubheja imali oyitholile.
Ukubheja ekhaya ukubheja
Ukubheja ekhaya kunikeza izimakethe zokubheja ezingaphezu kuka 25 ezemidlalo. Uyakwazi
ukubheja kunoma yini kusuka kubhola ephezulu yezindiza ukubheja okukhethekile kwezepolitiki naku-inthanethi
imidlalo. Ezemidlalo zihlanganisa izimakethe zokubheja; Ibhola lezinyawo, Tennis, Ibhasikidi, Ibhola lesandla,
Volleyball, I-ice hockey, Ezemidlalo Zezimoto, Volleyball, Ezombusazwe, I-baseball, Amarandi,
I-Counter-Strike, i-League of Legends, UDota 2, Ukuhamba ngebhayisikile, Ibhola, Ubusika bezemidlalo,
Umbhoxo, Imithetho ye-Aussie, isibhakela, ukulwa nemidlalo, Inkanyezi 2, Ihokhi, Futsal,
i-netball, Amabhiliyade, Ikhilikithi, Igalofu, ukuhamba ngomkhumbi, Inkampani.
Ukubheja ekhaya ekhaya kuhlanganisa izinkulungwane zezimake nsuku zonke, ngemicimbi kokuningi
kune 40 amazwe emhlabeni wonke. ukubheja ebholeni eligcwele lamazwe omhlaba nakho
kuyatholakala. Ababhejeli abasebenzisa ukubheja ekhaya bangabheja noma yini evela eYurophu ku
IPremier League Kenya Championship. Yonke imidlalo etholakalayo yokudlala ekhaya iyabheja
kusuka kubathengisi be-software abathembekile nokuphepha.
Kuyadumaza kancane, ngaphandle kokunikeza imikhiqizo ehlukahlukene kuyo
iwebhusayithi, ikhaya alibhejelanga uthando oluningi kukhasino lalo eliku-inthanethi, kuphela 147
imidlalo etholakalayo ukudlala ngesikhathi sokubhala. Ohlangothini oluhle, le midlalo
ahlinzekwa ikakhulukazi ngumhlinzeki wesoftware ohlonishwa kakhulu, INetEnt, okuyinto
kusho ukuthi abadlali bathola ukufinyelela kweminye yemidlalo ye-slot ethandwa kakhulu emhlabeni njenge
I-Starburst, Ama-Suckers wegazi, Twin Spin, Ibhola leChampions Cup iBerryburst, izinkawu
kanye nePlanethi Yokufuna Gonzo.
Isigaba sekhasino esiku-inthanethi sihleleke kahle, noma kunjalo, ngezigaba zemidlalo ku
izigaba ezahlukahlukene ezinjengemishini yama-slot, imidlalo yetafula, ama-jackpots nokuningi.
Abadlali bangaphinde bahlele imidlalo ngokususelwa kuzinhlobo namanani, njengoba
kanye nokusebenzisa ithuluzi lokusesha.
Indawo enkulu yokukhula embonini eminyakeni yamuva nje ibe kumakhasino abukhoma
futhi kwenziwa ekhaya akuzange kunganaki, ukuhlinzeka ngaphezulu kwe- 10 phila imidlalo yekhasino nge
I-NetEnt Live. Le midlalo ifaka ukuhlukahluka okuningi kwe-blackjack ne-roulette,
ngemidlalo yabathengisi ngokuvamile kwakujabulisa kakhulu.
Ngenkathi ikhasino ekhaya ukubheja kungenzeka kungatholi uthando oluningi, asikwazi ukusho okuningi
ngokubheja kwezemidlalo, enikeza izimakethe ngaphezulu kwe 40 ezemidlalo, esukela
kusuka ebholeni nasebhokisini kuya kusikebhe, chess nemidlalo yevidiyo efana ne-League of Legends.
Isigaba sezemidlalo sinezinkulungwane zemakethe zangaphambi komdlalo nezimakethe ezitholakalayo
ukubheja, ngesayithi eqhutshwa kakhulu futhi inikezela ngolwazi oluningi nokubheja
Imihlahlandlela yemicimbi ezayo. Isigaba sokubheja bukhoma sinezinkulungwane zezimakethe
abathintekayo kubadlali, kodwa kufanele kuqashelwe ukuthi le ngxenye
kucindezela ngolwazi oluningi impela, ngokungafani nokubheja kwezemidlalo kwanamuhla
amasayithi ukukhetha indawo yokuhlanza, indlela encane kakhulu.
Amathuba esiza akhonjiswa ngefomethi yedesimali, uthandwe ngababhuki ku-
Izwekazi laseYurophu. Ngenkathi ama-punter aseBrithani mhlawumbe ejwayele kakhulu izingqinamba
yethulwe ngefomethi yamaqhezu, ifomethi yedesimali ayisekho
iqonde ngqo ukubala inzuzo engaba khona, ikakhulukazi abasanda kufika ekubhejeni.
Bonke ababhejeli abenza ithuba lokubheja ezinye izinkampani bathola empeleni
ukungezwani okufanayo eBet-at-home njenganoma yimuphi omunye wabhuki emkhakheni wezemidlalo ukubheja.
Amakhasimende angathola izingqinamba ezinikezwe uhla oluhle lwezemidlalo, nobunzima obutholakala ku-
eminye imidlalo yaseYurophu engacacile njengePasapallo. Ukunikezwa Ukubheja Ikhaya Austrian
imvelaphi, akumangazi. Amakhasimende nawo angathola izingqinamba emicimbini yezepolitiki
kulobhuki, isihloko esinganikeza izinzuzo ezizuzisa labo
ube nolwazi nokuqonda.
Ukubamba iqhaza okuncane kokubheja kwezemidlalo eBet-at-home yi- £ 1 kubahlaseli be-UK.
Usizo oluphelele olutholakalayo luxhomeke kumcimbi wezemidlalo lapho a
iklayenti liyabheja. Uma obheja efuna ukubeka ukubheja kubaluleke kakhulu, bona
kufanele axhumane nethimba lenkonzo yamakhasimende eBet ekhaya ukuthola ukuthi yini
imigomo nemibandela ethile yomcimbi ababheja kuwo imali .
Ungabeka kanjani ukubheja?
Inqubo yokutshala imali yokubheja ekhaya ilandela izinyathelo nezinqubo ezifanayo
ukuthi uzothola ubuningi bezindawo zokubheja ze-inthanethi. Ukuthola izinto
kuqalile, okokuqala udinga ukuthola idivayisi oyifunayo, bese uchofoza izingqinamba
maqondana nentengo engezansi. Lokhu kuzokwengeza ngokuzenzakalela ukukhetha kubheja lakho
ukushelela, okuzovela ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini.
Lapho isiliphu sakho sokubheja sesibukwe ngokugcwele nokukhethwa okungeziwe, uzoba
utshelwe ukuthi ufake inani lokubamba iqhaza kwakho okufisayo. Uma usuqedile, cindezela
inkinobho elandelayo, hlola okukhethiwe futhi ukuze uqiniseke ukuthi konke kuyikho
indlela okufanele kube ngayo, bese uqinisekisa ukubheja kwakho lapho usuwanelisekile.
Idiphozithi kanye nenkokhelo
Lokhu kubheja ekhaya Sportsbook ukubuyekeza kutholakale ukuthi kukhona uhla olwanele lwe
izindlela zokukhokha ziyatholakala esizeni, ngezinketho ezifanele konke. A elula
Isici sesayithi ukuthi izindlela zokukhokha ziboniswa ngokuvelele ku
ikhasi lasekhaya. Abanye babancintisana nokubheja ekhaya bavame ukufihla ukukhokha kwabo
izindlela ezitholakala phansi kwesikrini noma ngokwemibandela nemibandela
isigaba samawebhusayithi abo.
Izindlela ezitholakalayo zediphozithi nokukhishwa kweBet Home kufaka i-Visa,
I-MasterCard neDiners Club namakhadi asebhange. Okwenziwayo kusheshe
kusetshenzwe kusetshenziswa lezi zindlela, kepha kukhona inkokhiso yesevisi ye- 2% kusetshenzisiwe. I-
ubuncane bokukhokhelwa kwendlela ngayinye yi- £ 10.
Kunobuncane obufanayo obukhona bezindlela zokuthengiselana ngogesi ezitholakalayo
esizeni zihlanganisa Skrill, INeteller nePaysafecard. Skrill One-Tap bese uqondise
idiphozi online nge skrill ayatholakala. Amakhasimende nawo angasebenzisa ibhange
ukudlulisa, yize ukuthengiselana kusetshenziswa indlela ethatha izinsuku ezintathu,
esikhundleni sokucutshungulwa ngokushesha, njengoba kunjalo ngazo zonke ezinye izindlela.
Uma ufuna ukukuthatha ube neBet-at-Home isipiliyoni semidlalo yokubheja uhamba, lapho-ke
kukhona uhlelo lokusebenza olukhulu lokubheja indawo yeselula yabasebenzisi be-Android ne-iOS.
Ukusebenza kwesayithi ephathekayo isebenza ngokufana kakhulu nesayithi ledeskithophu. It
kulula ukuyisebenzisa, inikeza uhla oluhlaba umxhwele lokusakazwa ngaphakathi komdlalo futhi lunikeze
wena isipiliyoni se-Bet-at-Home uma ukuphi kodwa usekhaya.
Isayithi leselula lingcono kakhulu kunenguqulo yedeskithophu.
Ngu admin Februwari 3, 2020
I-BetClic brand iyisisekelo senkampani iBetClic Group, okuyinkampani ebalulekile enezinkampani eziningi ezinkulu zemidlalo emhlabeni jikelele. Yize inkampani iqale impilo eLondon 2005, IBetClic yasungulwa ngumuntu waseFrance, UNicolas Beraud, okwaqala ngomsebenzi nokutshala imali kokuqala kwe 3 million €. In 2008, Kutholwe iMangas Gaming 75% yeBetClic umnikazi wayo we- 50 isigidi. Ngemisebenzi yayo yaseBrithani, IBetClic isuselwe eGibraltar futhi inamalayisense yiKhomishini Yezokugembula i-GB. IBetClic ibhalisiwe eMalta, inehhovisi eLondon, futhi inelayisense yokubheja ye-EU yonke.
Ngaphakathi nehholo lekhasino i-Betclic itholakala nje 400 iqoqo labanye abathengisi be-software abaphambili. Yize lelo nani liseduze nesilinganiso somkhakha, le pulatifomu inamaqhinga ambalwa ongezelela umkhono wakho. Ngaphandle kokunikeza imidlalo yama-poker ngemali yangempela njengengxenye yenethiwekhi ye-iPoker, IBetclic nayo inezindlu zokulawula ukugembula ezilawulwayo. Lezi ezintathu mpo, le pulatifomu inokukhethwa okuphakathi okuphakathi kwezinketho zokubheja online.
Njengoba kushiwo, I-Betclic isanda kwedlula 400 imidlalo yasekhasino ongakhetha kuzo. Ngokuqhathanisa, yingxenye yemakethe yamanje. Ngokuqhathanisa, I-LeoVegas isiphelile 700 imidlalo. Ngenhlanhla, okungase iBetclic kungabi nakho ngobuningi, yenzelwe ngekhwalithi. Ngokusebenzisana nabathuthukisi abahle kakhulu njengeNetEnt ne-Microgaming, I-Betclic ikunikeze ukufinyelela kwamanje kweminye imidlalo ehamba phambili embonini. Ngokwesibonelo, I-Gonzo Ukufuna evela kwi-NetEnt ibhekwa njengenye yezindawo eziphezulu zokubekwa kwamavidiyo emakethe namuhla ngenxa yezizathu eziningi. Okokuqala, kungukuwa kokunqoba okuyisici esisha kusho ukuthi ukuphotha okukodwa kungaholela emiklomelweni eminingi. Okwesibili, kunendaba ephelele yemidlalo. Lokhu kwenza isenzo ukuthi sicwiliswe futhi, esikhundleni salokho, isipiliyoni esijabulisayo.
Njengoba kulindeleke, lawula umdlalo wokungenisa izihambi ngokudlula 200 ividiyo ethuthukayo ye-jackpot nama-spinner ongakhetha kuwo. Lokho, nokho, indawo ethengisa ngempela ngombono wethu, ngoba, njengoba sishilo, ukuba khona konjiniyela njengeNetEnt kusho ukuthi uthola ukufinyelela okulula kweminye imidlalo emnandi. Beyond Slots, I-Betclic inehholo lemidlalo ebekwe ngaphezulu kwetafula ne-blackjack, roulette, inja ebomvu, itafula poker ne-baccarat. Okuhlaba umxhwele ngokukhethwa kwemidlalo yebhodi yengeza izinketho ezintsha ezifana 3 isondo roulette, kanye ne-classic njengokuqoqa uchungechunge lwegolide lweMicrogaming.
Ekugcineni, kanye ne-poker yevidiyo, uzothola 49 Amatafula bukhoma bukhoma umthengi Evolution Gaming, kufaka ne-blackjack, roulette, baccarat, itafula le-poker kanye neqoqo lokulala. Ngaphezu kokunikeza imidlalo yasekhasino ephila kakhulu kunontanga yayo abaningi, kuyacaca futhi ukuthi nalapha kugxilwe kukho okusha kwe-Betclic. Ngaphezu kokuhluka okujwayelekile, uzothola ukunikezwa kokudala kanye ne-roulette yebhola ephindwe kabili nomdlalo we-blackjack. Lokhu kuzinikezela emisha kuyinto, ngombono wethu, kungenye yamandla amakhulu weBetclic.
Kude ekungeneni kwekhasino, Isifiso sikaBetclic sezinhlobonhlobo siqokelwa esikhungweni sayo sokubheja kwezemidlalo, qhathanisa nezinye zezindawo zokugembula ezinhle kakhulu e-UK. Imidlalo emikhulu njengebhola, ithenisi kanye basketball top Uhlu lwesilinganiso nsuku zonke nokunikelwayo. Noma kunjalo, bambe ujule kancane, uzothola imigqa yokubheja yemisebenzi ye-niche efana ne-bandy, ipolo lamanzi nokuhamba ngomkhumbi. Ngokwemvelo, kunemicimbi yangaphambi komcimbi naphakathi kokudlala kuyo yonke imicimbi emikhulu. Uma kunophawu olumnyama olubhekiswe kubhuki i-Betclic alumbozwa umjaho wamahhashi. Noma kunjalo, leli qiniso eceleni, kunezinketho eziningi ezihehayo ezithuthukisa kuphela uma ukukhushulwa kukhuphula amanani kanye nesici seColoso esengeza isayithi lesikebhe esivame kwimicimbi ethile.
Izinketho zomdlalo wokugcina ozothola ngaphakathi kweBetclic egumbini lokuhlala le-poker. Ixhumeke kunethiwekhi ye-iPoker, le ngxenye yendawo ivamile ngokwesilinganiso esingaphezu koku 1,200 badlala imali nsuku zonke futhi abaningi abaqhudelana bomqhudelwano. Lokhu kuxhumeka kanjani kunethiwekhi ye-iPoker futhi kuvikela ukuthi abadlali bakho beBetclic bathole i-inthanethi nokufinyelela kuselula ku-software ye-poker online yakamuva futhi ephephe kakhulu. Njengenethiwekhi, I-iPoker ibikhona kusukela lapho 2004. Kusungulwe imboni enkulu ye-Playtech, le nethiwekhi ibe ngenye yezimboni ethembeke kakhulu futhi, namuhla, likhaya kwezinye izingosi ezibaluleke kakhulu emhlabeni. Ngokusebenza ne-iPoker, I-Betclic iyakwazi ukuhlinzeka ngeplatform ye-poker ephephile futhi ezinzile engagcini ngemihlobiso yendabuko nemidlalo yemali, kodwa ubuhlakani obunobuqili obunjenge-Twister Poker.
I-Betclic Poker Twister
Uma i-MTT akuyona into yakho (noma isikhathi siyinkinga kuwe) ungahle ukhethe & UGos Twister. Umqhudelwano wesikebhe se-Twister isikebhe se-SnG aziwa kakhulu yi-iPoker kanti amachibi anikezela ngemiklomelo kuze kube 1,000 izikhathi ukwamukelwa kwaso.
Ama-Twister SnGs adlala ama-3-athuthwe ngemiklomelo yokuphindaphinda izikhwama ngaphambi kokuqala komqhudelwano. Izinga lokukhululwa limi ngokulandelayo:
• 1 win to 1,000 €
• 2 ukunqoba kuze 2,000 €
• 5 ukunqoba kuze 5,000 €
• 10 € ukuwina kuze 10,000 €
• 20 ukuze uzuze 20,000 €
• 50 ukuhola kuze kube - 50,000
Uma umklomelo ungaphansi kwe- € 1,000 ophumelele uthatha konke; uma kungaphezu kwe- € 1,000 onqobayo uyathatha 80% nabanye abadlali ababili abanayo 10% ngamunye. I-Wild Twister Sit & Iya ibaleke iphansi (0.50 €) kanye nenkokhelo ye-Twister Sit & Amathikithi okuya afinyelela ku-100x.
Kuvulwa i-akhawunti yakho
Ukuze uqale ukugembula kwakho kwezokugembula, vele ungene kwiwebhusayithi yeBetclic bese uqhafaza inkinobho Yokubhalisa ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi.
Gcwalisa ifomu lokubhalisa nalo lonke ulwazi lwakho oluyisisekelo lweBetclic lungasetha i-akhawunti yakho. Ungakhathazeki, lokhu kufanele kuthathe umzuzu nje!
Ekugcineni udinga nje ukufinyelela iphasiwedi yakho ukukhumbula kalula. Qiniseka ukuthi okungenani 8 izinhlamvu ezinde ngokuhlanganiswa kwezinhlamvu nezinombolo.
IBONUS CODE KANYE NOKUTHANDAZA
Ikhodi yebhonasi yeBetclic Poker
To the Like wonke amakhasino aku-inthanethi, I-Betclic isancintisana kumakhasimende amasha ngokusebenzisa amabhonasi amukelekile omhlaba futhi inenzuzo enkulu.
Lokhu njengamanje kuthatha isimo sediphozithi yokuqala ye- 100% ukufanisa inani le- £ 500, okuqhathaniswa kahle nokuningi ukukhushulwa okuhlala kumakethe njengamanje.
Ukufinyelela kulokhu kulula kakhulu futhi, njengoba lokhu kunikezwa okwamukelayo kutholakala kubo bonke abadlali abasha ngakho-ke asikho isidingo sokungena. Empeleni, kunesidingo sokubhalisa i-akhawunti bese ufaka idiphozithi elingaphansi le- £ 10 okuzoba nakho cishe 1,000 imidlalo yasekhasino yokuntywila ezandleni zakho!
• Idiphozi yokuqala 100% kufinyelela ku- £ (izimfuneko 35 ukukhala) 500
Ukwamukela lo mnikelo, futhi kufanele uhambisane nezidingo zokujaja 35 Izikhathi zenani eliphelele lebhonasi.
Ngakho-ke, uma ngabe isikweletu sinikezwa ku-akhawunti yakho nge- £ 50 futhi uthole isamba esingu- £ 100 ukudlala, kufanele wager £ 3500 ngaphambi kokuhoxisa inzuzo ehlobene. Khumbula futhi ukuthi umdlalo ngamunye wekhasino ubalwa ngokuhlukile ekufezeni izidingo zakho, ngakho-ke lokhu kufanele kubhekwe lapho umnikelo webhonasi wamukelwa.
Uzoba nenani eliphelele 30 Izinsuku zokulungiselela ibhonasi kusukela ngosuku lokubhalisa, lapho izingxenye ezingasetshenziswanga zokuhlinzekelwa nazo zingasuswa ku-akhawunti.
Idiphozithi nobhuki lokukhokha online
Kunezindlela eziningi ezitholakalayo zediphozithi yeBetClic nokuyihoxisa. Amakhasimende angafaka imali ngedebhithi yeVisa kanye namakhadi wesikweletu, I-Maestro noma i-Mastercard. ukudluliselwa kwebhange, Abasebenza Imali, I-Paysafecard neNeteller ezinye izindlela. Ukudonswa kwemali encishisiwe kanye nama-maximum kusebenza kunoma yikuphi ukukhishwa, ikhasimende lisebenzisa ikhadi lesikweletu noma lasebhange. Le mikhawulo iyahlukahluka ngokusho komhlinzeki wamakhadi osetshenziswa ikhasimende. Zikhonjiswa ngokucacile lapho obheja enza ukuhoxisa ku-akhawunti yakho ye-BetClic. Ukuhoxa ngakunye okwenziwe ngabakwaMoneybookers nabakwaNeteller akumele kudlule kumakhilogremu ayizinkulungwane eziyishumi (£ 10,000) kokuthengiselana okukodwa.
Isamba esiphezulu esikhokhelwe ikhasimende bese ukubheja kungu- £ 200,000. Amakhasimende anganqwabelana inani eliphakeme le- £ 500,000 inzuzo ngesonto elilodwa. Inani elincane lokubheja ngu-10p, okuyinto enhle ejwayelekile kubagijimi bokuzijabulisa. Lapho ikhasimende livula i-akhawunti, kulindeleke ukuthi yenze idiphozi yokuqala okungenani engu- 8 a.
I-BetClic Casino Mobile Gameplay
Uma ubheja njalo ekhompyutheni noma udlala imidlalo yasekhasino ku-inthanethi kuya ngokuya ngokuya kugcwala ukuthi izosebenzisa i-smartphone noma ithebhulethi ukuxhuma epulatifomu yakho oyikhethile. Ngemva kwakho konke, kulinganiselwa ukuthi 51% zabadlali abahlulwa nge-smartphone noma ngethebhulethi ngesikhathi 2018, futhi leli nani kungenzeka likhuphuke eminyakeni ezayo.
Uma ngabe le yimodi oyithandayo yemidlalo, ungaqiniseka ukuthi ipulatifomu isimboze iBetclic. Empeleni, ungangena kwisayithi lamakhasino eselula, ngokumane ungene kwiwebhusayithi Betclic usebenzisa isiphequluli sakho seselula ozikhethele sona, ngoba ipulatifomu yakhelwe ukuhlinzeka ngokudlala kahle kokudlala ngokushesha.
Ngakolunye uhlangothi, ingafinyeleleka nangezicelo zendabuko zeBetclic zombili i-iOS ne-Android, okusho ukuthi imidlalo efana ne-Gonzo's Ukufuna neSouth Park kumane nje kungukuchofoza.
Uma uyikhasimende le-Apple, kufanele uqinisekise ukuthi imisebenzi yabo isebenza ngamadivayisi ahambisanayo ku-IOS 10.0 noma kamuva, ngenkathi ifoni noma ithebulethi yakho kahle izoba ngu-28.4MB wesikhala esikhona. Uma ungumnikazi wedivayisi ngaphandle kwe-iPhone noma i-iPad, uzodinga kuze kufike 15 MB yezingxenye zememori ne-Android 5.0 (ILollipop) noma ngaphezulu.
I-Betclic Poker inohlelo lokusebenza lwe-Android nohlelo lokusebenza lwe-iPhone olutholakalayo futhi kuyanconywa ukuthi ulande noma ngabe ngumdlalo omuhle kakhulu kuselula noma kuthebulethi. Ungangena futhi kuhlu oluphelele lwemidlalo yokubheja nemidlalo yasekhasino ngokusebenzisa lokho okuyithuluzi elibalulekile labathengi.
Uma une-Blackberry noma iWindows Windows phone ungafinyelela iklayenti ngeBetclic m.betclic.com, kepha ungafinyelela kubhuki lekhasino kuphela.
Uhlelo lokusebenza lwe-Betclic
I-IPhone ne-Android zombili zigxile ekubhejaneni kwezemidlalo, imidlalo yasekhasino neye-poker engatholakali ngohlelo lokusebenza. Ukubheja bukhoma kuthuthukiswa ngenkuthalo ekuqalisweni, namaqembu akhona emidlalweni eminingi ehlukene ikakhulukazi ekhasini lasekhaya. Kukhona nokubheja ngomzuzu wokugcina uthola imali esheshayo. Izicelo ngokuvamile zenzelwe kahle futhi kulula ukuzisebenzisa, futhi uma ungabhalisanga ungakwenza ngaphandle kokubuyela kuwebhusayithi. Isayithi elungiselelwe kakhulu, yize kungenjalo nenhle kangaka, ivumelana nezimo ngoba iyahambisana nemidlalo yasekhasino neye-poker nokubheja kwezemidlalo. Izicelo elungiselelwe mhlawumbe hhayi konke, nokho, ngoba amanye amakhasi afana ncamashi namakhasi wesiphequluli ukulingana esikrinini eselula
I-AvaTrade ngumthengisi osunguliwe owanikeza ibhizinisi online kusukela 2006. Amanani ayo angokulunga nobuqotho, ukuzihlola okungaxegi, service kwamakhasimende kanye emisha njalo. I-AvaTrade ihlose ukunxenxa abahwebi bawo wonke amazinga wamakhono futhi inikeze amapulatifomu wokuhweba aguquguqukayo.
I-AvaTrade inokuningi kunoku 200,000 amakhasimende abhalisiwe aqeda 2 ukuthengiselana ngezigidi ngenyanga. Amanani wokuthengiselana cishe 60 billion billion ngenyanga, futhi lelo nani liyanda. Lo broker uxhaswa ngezilimi eziningi ubusuku nemini kanye nezinketho zamapulatifomu.
Indlunkulu yolawulo ye-AvaTrade eDublin, I-Ireland. Le nkampani inezikhungo zokuthengisa eDublin, EParis, EMilan, ESydney, Tokyo, NeMadrid, EMongolia, EBeijing, INigeria, ISantiago naseGoli. I-AvaTrade ilawulwa eYurophu, iBritish Virgin Islands, E-Australia, EJapan naseNingizimu Afrika. Abanye abathengisi bakholelwa ukuthi indlunkulu ye-AvaTrade ise-Ireland yiphuzu eliqinile ekwamukeleni kwayo izinkampani eziningi zikhetha ukuhlala eCyprus. Noma kunjalo, kuyindaba yokuzikhethela komuntu siqu.
Amazwe amaningi anezinguqulo zawo ze-AvaTrade ezinemithetho ehlukile. I-Central Bank of Ireland ilawula i-AVA EU Trade Ltd (Cha. C53877). I-B.V.I Financial Services Commission ilawula i-AVA Trade Ltd. I-ASIC ilawula i-Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (Cha. 406684). Ikhomishini Yezinsizakalo Zezimali zaseNingizimu Afrika (FSP) ilawula i-Ava Capital Markets Pty (Inombolo ye-FSP. 445984). I-Ava Trade Japan iK.K. i-FSA eJapan.
Ukuthi i-AvaTrade ilawulwa emikhakheni eminingi ehlukene kungasiza ukuthuthukisa ukuzithemba kwabatshalizimali emhlabeni wonke. Ngemva kwakho konke, lokhu kusho ukuthi izinhlangano eziningi zinikezela nge-COMPLIANT AvaTrade nemithetho yendawo.
Izinhlobo zamapulatifomu wokuhweba atholakalayo
Enye yezinto ezihlaba umxhwele kakhulu ze-AvaTrade inani lamapulatifomu okuhweba atholakalayo kubathengisi. Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu olapha, noma ngabe usaqala, Umakadebona wezentengiso onamava, noma okunye. Amapulatifomu alandelayo anikezwa yi-AvaTrade:
• I-MetaTrader 4 ipulatifomu
• I-MetaTrader 5
• I-Meta Trader ye-Mac
• I-Meta Trader yezohwebo zeselula (Landa uhlelo lokusebenza i-Avatrade ngqo lapha)
• I-Meta Trader yewebhu yezohwebo
• Ingxenyekazi ye-AvaTradeAct (ipulatifomu ekhethekile)
Ngaphezu kwalezi zingxenyekazi, I-AvaTrade inikeza isoftware yokuhweba ehlukahlukene ezenzakalelayo ukuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye. Lokhu okulandelayo:
• Ibhokisi lebhokisi
• I-Mirror Trader
• Insizakalo Yezimpawu ye-MQL5
• Ukuhweba i-API
• Ukuhweba okuphindiwe
Ama-Akhawunti Okuhweba Anikelwe
I-AvaTrade igcina izinto zilula ngama-akhawunti abo ngokunikela ngezinhlobo ezimbili kuphela ze-akhawunti kubathengisi abaningi. I-akhawunti ejwayelekile ne-akhawunti yedemo. Ama-akhawunti ajwayelekile angavulelwa okuncane $ 100 ngekhadi lesikweletu noma $ 500 ngokudluliswa kwebhange.
Ngokungeziwe kuma-akhawunti amabili ajwayelekile, Abathengisi abangamaSulumane bahlaliswa ngokunikela “ushintshanisa” ama-akhawunti wamahhala asebenza ngokuya ngomgomo we-Islamic Sharia inzalo yokuhweba yamahhala.
Ngaphezu kwalokho, abadayisi abangochwepheshe bangavula ama-akhawunti MAM ukuphatha kalula ama-akhawunti amaningi wamakhasimende abo. Lezi zinhlobo zama-akhawunti zifaka izici ezilandelayo:
• Amandla wokwenza amaqembu amaningi okuxoxisana ngaphansi
• Zonke izinhlobo zokulawula njengezitobhi ze-MT4, imikhawulo nezihlobo ziyatholakala
• Abeluleki Bochwepheshe (Ama-EA) kuyavumelana
• Ubuncane besabelo 0.01
• Ukwabiwa kwamapharamitha amaningi
• Oda imali yama-akhawunti angenamkhawulo
• Ukutshalwa kwezimali zokuhweba okuvela ku-akhawunti enkulu
Yini idiphozithi ephansi ku-AvaTrade?
Idiphozi encane edingekayo yile $ 100 I-AvaTrade yesikweletu / amakhadi asebhange, kodwa $ 500 ngokudluliselwa kwebhange. Njengenjwayelo, ufaka leyo nani ngemuva kokudala i-akhawunti yakho ukuze uvivinye onke amapulatifomu ukuze uqiniseke ukuthi alingana nezidingo zakho.
Ukuhweba kwe-AvaTrade Imikhiqizo ye-AvaTrade inikeza abathengi bayo ukuhweba nge-Forex ne-CFD ngaphezulu 250 izinsimbi zezezimali. I-AvaTrade ihlukanisa imikhiqizo enikeza abathengisi ngezigaba eziyisithupha: forex, izinkomba, amasheya, Ama-ETFs, izimpahla kanye nama-cryptocurrensets.
Abatshalizimali bakhululekile ukuhweba:
• Forex – Ngaphezulu 50 ngababili zezimali ezitholakalayo, kufaka phakathi wonke ama-majors, izingane, nezinhlobo eziningi zakwamanye amazwe ezitholakalayo 24 amahora ngosuku, 7 izinsuku ngesonto. Abahwebi futhi bangajabulela ukusabalala kokuncintisana okuphansi njenge 0.8 pips kanye nokwezelela kuze 400: 1.
• idijithali yemali – (Akutholakali eCanada) – Abathengisi bangashintshana kuze kufike ku- 9 ama-cryptocurrensets ahlukene nge 20: 1 amandla. Lokhu manje kufaka iRipple, Ethereum, I-Bitcoin nemali i-Bitcoin.
• izinkomba, izibopho, amasheya, Ama-ETF nempahla – Abathengisi be-AvaTrade bajabulela ukusizakala okuphezulu kakhulu nokusabalala okuncintisana kakhulu futhi kuphansi ngokuhweba kwalezi zimpahla zezezimali.
• Izinketho – I-Avatrade yenza izinketho zokuhweba zitholakale kubadayisi bawo wonke amazinga wesipiliyoni. Isiteji esisha sokuhweba izinketho sinciphisela ubunzima bezindlela zokukhetha i-vanilla futhi sivula amathuba ahlukahlukene okusebenzisa umkhiqizo.
Izinhlobo zama-akhawunti ziyatholakala nge-AvaTrade:
• I-Akhawunti Ejwayelekile – i-akhawunti ingeyokuthile
• I-akhawunti yenhlangano – i-akhawunti iphethwe yinhlangano
• i-akhawunti yamaSulumane – ngaphandle kwe-akhawunti yokushintshanisa okusho ukuthi ayilayishi i-swaps egameni.
Uma ungumhwebi onolwazi, ungacela i-akhawunti yokuhweba evulekile ye-AvaTrade lapho isilinganiso siphezulu khona kune-akhawunti ejwayelekile. Lokhu kudinga ukuthi ube nesipiliyoni esifanele emkhakheni wezezimali, umsebenzi owanele wokuhweba ekugcineni 12 izinyanga kanye nokugcina okungenani 500 Iphothifoliyo leyo.
Njengohlobo lwe-akhawunti olwengeziwe, zinikeza ne-akhawunti yedemo. Ilungele ukuhlola nokulinganisa isu lakho lokuhweba.
Ungayivula kanjani i-akhawunti yakho
Ukudala i-akhawunti kulula futhi kuyashesha, njengabanye ababambeli i-CFD / Forex:
Faka eminye imininingwane yakho eyisisekelo (ungasebenzisa noma yimaphi amaphrofayili wakho wokuxhumana nomphakathi njenge-Facebook noma i-Google, futhi)
Phendula imibuzo embalwa ehlola izinga lakho lokuqonda kwezohwebo
Qinisekisa ubuwena nendawo ohlala kuyo kunoma iyiphi ikhophi engeza ikhadi lakho lobunikazi, ipasipoti noma ilayisense lokushayela bese ulanda ikhophi yesikweletu sakho noma isitatimende sasebhange.
Imali yokufaka kanye nezinketho
Ukulayisha kwe-AvaTrade akukho mali yokufaka. Ngaphezu kokudluliselwa kwebhange nesikweletu / I-debit card, ungasebenzisa isikhwama esiningi se-elekthronikhi:
I-POLi yabantu base-Australia
Inani eliphansi ongalifaka $ 100 noma okulinganayo kwezinye zezimali.
Lapho sifaka i-akhawunti yethu sisebenzisa ikhadi lasebhange, kuthathe 4-5 amahora kuze kufike imali. Amakhadi esikweletu / isivinini sokudlulisa imali kumele sibe khona manjalo futhi bekudingeka idiphozi yesheke le-AvaTrade kancane.
Uma ukhetha ukudluliselwa kwebhange, kungathatha izinsuku zebhizinisi ezimbalwa. Ungafaka imali kuma-akhawunti asebizweni lakho.
I-Akhawunti yeDemo ye-AvaTrade
Abahwebi baxhuma ngokwehlukana kwipulatifomu yabo yedemo ye-AvaTrade ye- 21 izinsuku ngemuva kokuvula. Abadayisi be-Akhawunti yeDemo bathola 10,000 ngemali ebonakalayo ngohlobo lwabo lwemali.
AbaThengi abathengisayo banelungelo lokuthola ibhonasi eyamukelayo ngemuva kokwenza imali kuma-akhawunti abo. Ibhonasi ithi 25% wediphozithi yokuqala futhi kufihlwe kuyo 10,000.
Ibhonasi ye-AvaTrade Bhalisa namaphromoshini
Njengoba i-AvaTrade ilawulwa ngaphakathi kwe-EU, amabhonasi okubhalisa awatholakali. Lokhu kungenxa yezimakethe ezivela kokunye (MiFID) kwaqaliswa ezingeni laseYurophu ukwakha imakethe esobala nokuvikela abathengisi. Ngakho-ke, uma umthengisi ehlinzeka ngebhonasi yokubhalisa, okusho ukuthi azilawulwa ku-EU noma azilawulwa nhlobo, okusho ukuthi bebengasebenza ngokungemthetho. Noma kunjalo, I-AvaTrade inganikela ngezinzuzo ezithile kumakhasimende amasha ngemuva kokufaka idiphozi ku-akhawunti yabo. Ukuthola ukuthi yiziphi lezi, vakashela iwebhusayithi ye-AvaTrade.
Ukuvula i-akhawunti nge-AvaTrade, uzodinga idiphozi yokuqala yokuqala ye- $ 100 uma kwenziwa ngekhadi lesikweletu noma idiphozi yokuqala ye- $ 500 uma kwenziwa ngokudluliswa kwebhange. Ungakhokhela i-akhawunti yokuhweba ngamakhadi asebhange, amakhadi wesikweletu afana ne-MasterCard, IVisa neJCB, POLI, nokusebenzisa ukudluliswa. I-AvaTrade iphinde inike amandla abahlinzeki bokukhokha abanjengo-elektroniki njenge-PayPal, I-Neteller, I-WebMoney neMoneybookers yawo wonke amakhasimende ngaphandle kwalabo abahlala e-Australia nase-EU. Ukusekelwa kwamakhasimende kwe-AvaTrade kuqinisekisile ukuthi idiphozi encane ye- $ 100 kungenziwa kusetshenziswa i-PayPal.
Uma ufuna ukuqala ukuhweba ngokushesha, indlela engcono kakhulu yokuxhasa i-akhawunti ibandakanya ukusebenzisa ikhadi lakho lesikweletu leVisa noma i-Mastercard. Kufanele ukhethe “I-akhawunti yami” lapho-ke “Idiphozithi” bese ugcwalisa imininingwane edingekayo. Uzodinga nombala wokukhanya okukhanyayo noma isithombe sekhadi lomazisi esikhishwe isithombe esisemthethweni uhulumeni kanye nekhophi elisobala lakamuva (ngaphakathi kokugcina 60 izinsuku) invoice kagesi evela enkampanini yakho yamanzi noma kagesi, Ngokwesibonelo. Isitatimende sasebhange esinegama lakho eliphelele nekheli nakho kunganela. Ngaphezu kwalokho, uzodinga i-scan yombala okhanyayo noma isithombe sangaphambili nangemuva lekhadi lakho lesikweletu noma lebhange elibonisa wonke amakhona. Isithombe kufanele sibe negama lakho licacile, nezinombolo ezine zokuqala nezokugcina zenombolo yekhadi nosuku lokuphelelwa isikhathi. Konke lokhu kuyadingeka ngenxa yemithetho emelene nokuthathwa kwemali.
Uma kungenzeka ube ngumhwebi osanda kubhaliswa, I-AvaTrade inikeza ngomusa 40% bhalisa ibhonasi ye $ 10,000 wenani lediphozi yakho yokuqala elizongezwa ekuthengeni kwakho kokuqala kusayithi. Qiniseka ukuthi uhlola ukuthi yiziphi izidingo zokwenza ukuhoxa ngemuva kokusebenzisa ibhonasi.
Ukwenza ukuhoxa, kufanele uqale ungene ngemvume ku-akhawunti yakho bese ukhetha i-AvaTrade “I-akhawunti yami” phezulu ngakwesokudla kwekhasi lewebhu. Ngemuva kwalokho ungagcwalisa ifomu lokuhoxa njengemiyalo eyethulwe ngokucophelela. Lapho imininingwane isiqediwe, ungahambisa ifomu ngokuchofoza ku- “Imibhalo” Landa, okukhona futhi kufayela le- “I-akhawunti yami”. Ukuhoxiswa kungathatha 24 ukuze 48 amahora wezimali ezikhishwe kwi-akhawunti yakho nezinsuku ezinhlanu zokusebenza ukuze izimali zifike ku-akhawunti etholwayo. NgoMgqibelo nangeSonto akuzona izinsuku zokusebenza kwe-AvaTrade.
Amathuluzi wokuhweba ngosuku we-AvaTrade
Ezemfundo – I-AvaTrade inesikhungo semfundo esehlukile. Kungaba okungcono kakhulu esake sakubona, ngamavidiyo, amabhuku, okokufundisa, uhlu lwamagama, futhi nokuningi. Kunesigaba esiphelele kuwebhusayithi yayo esizinikele ekufundiseni abahwebi. Ngaphezu kwalokho, isiza sonke ngokuvamile sifundisa kakhulu abadayisi bezinsuku.
Amathuluzi Okuhweba – I-AvaTrade inezici eziningi ezinikelwe abathengisi bosuku abaphumelelayo. Enye yezinto ezihlaba umxhwele kakhulu ngamaphakeji esoftware ayo ukuthi ukuhweba okuzenzakalelayo kuhlukile ekuhwebeni kosuku.
Ububanzi bezimpahla – Kunenqwaba yezimpahla ongakhetha kuzo, yini eyenza lo broker omkhulu wabathengisi bosuku abaqala noma omakadebona.
Isifundo Sokuqeqesha Samahhala – Ukuphakanyiswa kwakamuva kokubambisana neManchester City Football Club kufaka phakathi izifundo ezithile zokuhweba mahhala.
Ngu admin Februwari 1, 2020
24inketho yadalwa ngaphakathi 2008. Ukuvula njengomthengisi ongakhetha kukho kanambambili, 24option is now a brand leader CFD and Forex Ltd Rodeler owned company headquartered in Cyprus. For traders outside the EEA (European Economic Area), 24option clients doing business through a separate company called Capital Limited Richfield based in Belize.
Gold Accounts managers get higher accounts, access to central bargaining, free withdrawals and one-to-one course for MT4 use. Ekugcineni, Platinum accounts have better spreads. You can update your account in the future, with the approval of 24option.
So traders can use one of the two platforms, each offering different strengths. MT4 is perhaps more difficult to use, but includes more tools path analysis and automation options. Traditional platform is easier to use. Operators can, kunjalo, carry out research on a platform, and commerce on the other. Access data remain the same for both.
You can run the MT4 platform browser such as does traditional web-based platform. Noma kunjalo, the most optimal setup is for you to install on your PC platform. MT4 is supported by both MacOS and Windows and Linux.
Kunjalo, the MT4 platform 24option may not be for everyone.
Noma kunjalo, the main benefit of the MT4 platform is that knowledge is learned is highly transferable to another broker. Given that is in use in many runners, who do not need to relearn how to operate on other platforms.
Choice is a type of trade that you can make that will end either in the income statement. Ngenjwayelo, there are three main types:
He Options High / Low is one of the most common types of binary choice. Empeleni, every broker that we have analyzed the offers High / Low choice, although some of their calls Call / Put choice. Despite the name, they are the same thing.
One-Touch or No-Touch trades based on price, so they fall into the same category as the High / Low trade. They are trading more risky, because they are more difficult to predict accurately. Ngenxa yalokho, pay outs are usually much higher.
It is therefore, potentially more profitable trading is risky and, as you make predictions more difficult. Ngokwesibonelo, it is easier to predict if the trade will go higher or lower than the current value for the next five hours. It is much more difficult to predict that it will reach a certain value in that time period. Similarly, it is also difficult to predict that it will not reach the target price in the period. This is because you have to predict the price movements and how much it will move. With the option High / Low, you only need to predict the direction of movement.
Limit options carries the risk level that is between the High / Low selection and One-Touch / No-Touch option. Ngenxa yalokho, more of their pay outs for selection High / Low but lower than a touch choice.
The trading platform also provides user access to 24option signals. Sentiment merchant bar is also used to aid decision trader. The demo video at the bottom of this review illustrates how to get the most out of this. Njengenjwayelo, the service signal should be treated with a certain degree of caution, especially where provided by the broker. But they can be an additional tool to confirm, or withdraw from, a particular trade.
To make a trade, go to the web at the 24option platform and make sure that the graph is closed so you can see the order form. Select the instrument that you choose on the left side of the screen, then fill the volume you want to trade (in lots) on the form. When you enter a number, the pip value to the right will automatically renew. Directly under the volume and pip value, there is an option to “Open trade when the level of the range.” Check the box if you want to open a trade only when the level reaches a certain point, then adjust the value in the box on the right. Once you do, you can choose Sell or Buy. From there, you have the option of choosing to “shut confused” noma “Close on profits,” if you wish. Check out one of these boxes will allow you to adjust the measurement pips or level and then adjust the image. Once you’re ready, click Trade.
This is because the MiFID directive has banned the use of bonus incentives structure for clients based in the EU. Noma kunjalo, this does not happen in other international markets.
Through their holding company Belize, 24option give their traders the opportunity to take part in a deposit bonus. They will credit your account with up to 50% noma $ 500 on your initial deposit (whichever is the lowest).
This bonus can then be seen as free trade money that you can use to increase your liquidity. It is, nokho, important to point out that there are certain terms and conditions attached to this bonus.
 Electronic Paymets: Skrill, I-Neteller, Qiwi, Astropay etc.
Unlike most brokers, 24option only requires you to complete the KYC after you request a withdrawal, not when you set up the account. Ngakho-ke, if you make a withdrawal, you will need to verify your identity and details.
KYC requirements this is something that is required by the law of the CySEC to prevent money laundering. Ngakho-ke, 24option will require you to submit the following:
Note: If you are funded via credit card then they will refund you your initial deposit and the mass will be pulled through other methods (bank wire, Ngokwesibonelo).
24option provides mobile trading app is free for both iOS (iPhone and iPad) and Android. Applications are available for download in both the Apple App Store or Google Play Store. This application provides all the functionality of the main website, including many account management features. Lezi zinhlelo zisebenzisa ithuba lamandla wesikhulumi ngasinye (I-Android noma i-iOS) ukukhulisa ukusebenza kudivayisi ngayinye.
Kusetshenziswa uhlelo olukhohlisayo nolunembile. Inqubo yokungena ishesha kodwa iphephile. ukuhlaziywa kobuchwepheshe ukuze kube nzima esikrinini esincane, kodwa ukuhweba nokulungiswa kwemininingwane kalula nebhonasi yangempela yabathengisi abadinga ukuphendula kumicimbi ngenkathi bekude nekhompyutha noma kwi-laptop yabo.
© 2020 - Ukubheja Ibhokisi | Ingqikithi ye-WordPress Ngu Impilo yeWP | Inikezwe amandla yi I-WordPress.org